အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု - ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်လမ်းညွှန် | ဒူဘိုင်း & ဘူဒါဘီ
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at စက်တင်ဘာလ 27, 2019
ယူအေအီး စော်ဘွား - လမ်းညွှန် Expat. အဘူဒါဘီကျွန်းများဖယ်ထုတ်ပြီး, တိုင်းပြည်၏စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်း 67,340 ညီမျှ 86.7 စတုရန်းကီလိုမီတာဧရိယာနှင့်အတူအားလုံးခုနစ်ခုစော်ဘွား၏အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထက်ပို 400 ကီလိုမီတာတိုးချဲ့နေတဲ့ကမ်းရိုးတန်းရှိပြီးသုံးအဓိကဒေသများသို့အုပ်ချုပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခွဲခြားထားတယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးသောဒေသသည်အဘူဒါဘီ (Emirate) ၏မြို့တော်နှင့်ဖက်ဒရယ်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ရှိတ်ဇေးဒါး၊ ယူအေအီး ဒီမှာနေတယ် ဖက်ဒရယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံသည့်ပါလီမန်အဆောက်အအုံများ၊ ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ၊ နိုင်ငံပိုင်အသံလွှင့်ဌာနများနှင့်ရေနံကုမ္ပဏီများသည်အဘူဒါဘီတွင်တည်ရှိပြီး Zayed တက္ကသိုလ်နှင့်အဆင့်မြင့်ရာနေရာဖြစ်သည်။ နည်းပညာကောလိပ်များ။
အဓိကအခြေခံအဆောက်အအုံအဆောက်အအုံများမှာ Mina (Port) Zayed နှင့် Abu Dhabi International တို့ဖြစ်သည် လေဆိပ်။ အဘူဒါဘီကျွန်း၏ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကီလိုမီတာများစွာအကာအကွယ်မဲ့အန္တရာယ်ကင်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လှေလှော်ခြင်းနှင့်စက်ကြောခြင်းစသည့်ကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားနှင့်အပန်းဖြေစရာနေရာများရှိသည်။ ဗိသုကာပညာအရပြောရရင်မြို့လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် နေရာ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများဖြစ်သောဗလီငယ်များကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးအနာဂတ်ခေတ်သစ်မိုးမျှော်တိုက်များ၏အရိပ်အောက်တွင်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
အရှေ့ဒေသကြီးအဖြစ်လူသိများဘူဒါဘီရဲ့ဒုတိယဒေသ, ယင်း၏မြို့တော်အယ်လ် Ain မြို့အဖြစ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်မြေသြဇာကောင်းသောဧရိယာခြံ, အများပြည်သူပန်းခြံများနှင့်အရေးကြီးသောရှေးဟောင်းသုတေသနက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပဒေသာနှင့်အတူစိမ်းလန်းသောကြွယ်ဝနေသည်။ ဒါဟာအစမြောက်မြားစွာ artesian ရေတွင်းများသို့ကျက်စားသောသိသိသာသာမြေအောက်ရေအရင်းအမြစ်များကိုအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဒေသတွင်အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားမှတ် Ain အယ်လ် Faydah ပန်းခြံ, Jebel Hafit, အယ်လ် Hili, အယ်လ် Ain တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့် Al Ain ပြတိုက်မှာအပန်းဖြေပန်းခြံဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ကိုလည်းယင်း၏အများအပြားစှမျးတဲ့တက်ကြွဆေးကြောငျးတို့တှငျပါဝငျသောယူအေအီးရဲ့ပထမဦးဆုံးတက္ကသိုလ်, ယူအေအီးတက္ကသိုလ်, တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးစင်တာနှင့် site ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ထိပ်တန်းလမ်းကွန်ယက်ကိုအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်နှင့် Al Ain အယ်လ် Ain အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှတဆင့်ပြင်ပကမ္ဘာသို့ချိတ်ဆက်နေသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု - ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်လမ်းညွှန်!
အနောက်တိုင်းဒေသကြီး, ထိုစော်ဘွားရဲ့တတိယအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ, 52 ကျေးရွာများပါဝင်သည်နှင့်၎င်း၏မြို့တော် Bida Zayed, ဒါမှမဟုတ် Zayed စီးတီးအဖြစ်ရှိပါတယ်။ ကျယ်ပြန့် afforestation ထက်ပို 100,000 သန်းအမြဲစိမ်းအပါအဝင်အနည်းဆုံး 20 ဟက်တာမှာဖုံးလွှမ်း။ နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးရေနံသန့်စင်စက်ရုံကိုဖြစ်သကဲ့သို့တိုင်းပြည်၏အဓိကကုန်းတွင်းရေနံလယ်ကွင်းအယ်လ် Ruwais မှာ, ဒီမှာတည်ရှိနေကြသည်။
အဘူဒါဘီ၏သုံးပြည်မဒေသများအပြင်အဓိကကမ်းလွန်ရေနံလယ်ကွင်းတည်ရှိသည်ဘယ်မှာအနီး Das, Mubarraz, Zirku နှင့် Arzanah အပါအဝင်စော်ဘွားအတွင်းအရေးကြီးသောကျွန်းများတစ်အရေအတွက်ရှိပါတယ်။ ပိုမိုနီးကပ်စွာ inshore အတူတကွများစွာသောအခြားကျွန်းများနှင့်အတူ, Dalma, ဆာဗာနိ yas, Merawah, အဘူအယ်လ် Abyadh နှင့် Saadiyat ဖြစ်ကြသည်။
၏စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ဒူဘိုင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 72 ကီလိုမီတာယူအေအီး၏အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်တိုးချဲ့။ ဒူဘိုင်းတွင်ofရိယာရှိသည်။ 3,885 စတုရန်းကီလိုမီတာသည်ကျွန်းများမှအပနိုင်ငံ၏စုစုပေါင်းofရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်းမှာ5နှင့်ညီမျှသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ Deira မြောက်ပိုင်းfromရိယာမှ Bur Dubai ၏တောင်ဘက်အပိုင်းကိုပိုင်းခြားထားသောအကွေ့အကောက်များသောချောင်းရှည်သောကျဉ်းမြောင်းသော 10 ကီလိုမီတာ၏အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။
အတူတူအဓိကကုမ္ပဏီအများအပြားခေါင်းကိုရုံးများနှင့်အတူအနန္တတန်ခိုးရှင်၏ရုံးခန်း, ဆိပ်ကမ်း Rashid, ဒူဘိုင်းဝေါလ်ထရိတ်စင်တာ, အကောက်ခွန်, ထုတ်လွှင့်စခန်းများနှင့်စာတိုက်အခွင့်အာဏာအားလုံး Bur Dubai မှာတည်ရှိပြီးနေကြသည်။ Deira လက်လီဆိုင်များတွင်, စျေးကွက်, ဟိုတယ်များနှင့်ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးင်တစ်ဦးတိုးတက်နေတဲ့စီးပွားဖြစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Bur ဒူဘိုင်းနှင့် Deira အယ်လ် Maktoum နှင့် Al Garhoud တံတားများအားဖြင့်ဆက်နွယ်နေအဖြစ်ချောင်းအောက်မှာဖြတ်သန်းရာအယ်လ် Shindagha ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနေကြသည်။
Jebel Ali, ကြီးမားတဲ့လူလုပ်ဆိပ်ကမ်းအိမ်, နှစ်ဦးစလုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တစ်ဦးပြန်လည်ခွဲဝေမှုအမှတ်အဖြစ်ဇုန်ကိုအသုံးပြုဖို့ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်း၏အစဉ်အဆက်ကြီးထွားလာစာရင်းရာအာရေဗျတွင်အကြီးဆုံးအခမဲ့-ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ရှိပါတယ်။
ပြည်တွင်းရေကြောင်း, Hatta ၏တောင်ပေါ်အပန်းဖြေမြို့ကလေးတစ်ဦးအလွန်ဆွဲဆောင်မှုတည်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အိုင်ရေလှောင်ကန်ကပ်လျက်, အ Hatta ဝိန်း Fort ဟိုတယ်ကျယ်ပြန့် parkland အတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ကလည်းအိုမန်ပိုင်နက်သို့တိုးချဲ့ထားသည့်အနီးအနား Wadi နှင့်တောင်များ, ရှာဖွေစူးစမ်းတစ်စုံလင်သောအခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Sharjah ၏စော်ဘွားတစ်လျှောက်ရှိယူအေအီးရဲ့ပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်း၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 16 ကီလိုမီတာကိုတိုးချဲ့နှင့် 80 အတွင်းပိုင်းသို့ကီလိုမီတာထက်ပိုသည်။ ထို့ပြင်အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့နယ်စပ်ရှိအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး Sharjah ပိုင်သုံးလူစု, ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Kalba, Khor Fakkan နှင့် Dibba Al-Husn ဖြစ်ကြသည်။ အမ်းမရိတ်ကျွန်းဖယ်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံ၏စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်း 2,590 ညီမျှဖြစ်သော 3.3 စတုရန်းကီလိုမီတာဧရိယာ, ရှိပါတယ်။
အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့ overlooks ရာ Sharjah ၏မြို့တော်အများအပြားပြတိုက်အပါအဝင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရိုးရာစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာခင်းကျင်းနှင့်အတူအဓိကအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစင်တာများအတူတကွပါဝင်သည်။ ထူးခြားတဲ့အထင်ကရအဆောက်အအစ္စလာမ့်ဒီဇိုင်းကိုထင်ဟပ်နှစ်ခုအဓိကဖုံးလွှမ်း souqs ပါ၏ အပန်းဖြေဒေသများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအယ်လ် Jazeirah ပျော်စရာပန်းခြံနှင့် Al Buheirah Corniche အဖြစ်အများပြည်သူပန်းခြံများများစွာ။ အဆိုပါမြို့က၎င်း၏မြောက်မြားစွာကြော့ဗလီအတွက်လည်းသိသာသည်။ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အတူ links Sharjah အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်ဆိပ်ကမ်း Khalid ကပေးနေကြသည်။
Sharjah လည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများ၏ကျယ်ပြန့က၎င်း၏ကြွယ်ဝသောနှင့်မြေသြဇာမြေဆီလွှာပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးထားရာ Dhaid ဖြစ်ပါတယ်အကျော်ကြားဆုံးအဆိုပါအရာအချို့အရေးကြီးသောအိုအေစစ်ဒေသများ, လွှမ်းခြုံ။ Khor Fakkan အဓိကအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဆိပ်ကမ်းကိုအတူ Sharjah ပေးပါသည်။ နှစ်ဦးကကမ်းလွန်ကျွန်းများ Sharjah, 1971 ကတည်းကအီရန်တို့ကစစ်ရေးကျူးကျော်မှုအောကျတှငျခဲ့သည့်အဘူ Musa, နှင့်ဆာဘူ Nu'air ပိုင်။
Sharjah ရဲ့မြို့တော်၏တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးအရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး Ajman, အဖြူရောင်သဲကမ်းခြေတစ်လှပသော 16 ကီလိုမီတာလမ်းပိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်းများဖယ်ထုတ်ပြီး, တိုင်းပြည်၏စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်း 259 ညီမျှသောအကြောင်းကို 0.3 စတုရန်းကီလိုမီတာဖုံးအုပ်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌သေးငယ်တဲ့စော်ဘွားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမြို့တော်, Ajman ၎င်း၏အလယ်ဗဟိုမှာသမိုင်းဝင်ခံတပ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်မကြာသေးမီကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ယခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြတိုက်ရတာဟာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ရုံးခန်း, အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများ, ဘဏ်များနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနများအပြင်၌, စော်ဘွားလည်း Ajman များ၏ဆိပ်ကမ်းတည်ရှိသည်ရသောသဘာဝဆိပ်ကမ်းနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ Masfut အဆိုပါ Manama ဧရိယာအရှေ့ဘက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 110 ကီလိုမီတာတည်ရှိသည်စဉ် 60, မြို့၏အရှေ့တောင်ဘက်မှကီလိုမီတာတောင်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးရွာဖြစ်ပါတယ်။
24 ကီလိုမီတာမှဆန့်တစ်ဦးကမ်းရိုးတန်းသည့် Umm Al-Qaiwain ၏စော်ဘွား, Ras Al-Khaimah အရှေ့မြောက်ဘက် Sharjah အကြားအနောက်တောင်ဘက်ရန်, ယူအေအီး၏အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသောနှင့်နေသည်။ ၎င်း၏ကုန်းတွင်းပိုင်းနယ်စပ်အဓိကကမ်းရိုးတန်းကနေ 32 ကီလိုမီတာအကြောင်းကိုတည်ရှိသည်။ အမ်းမရိတ်၏စုစုပေါင်းဧရိယာကျွန်းများဖယ်ထုတ်ပြီး, တိုင်းပြည်၏စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်း 777 ညီမျှသောအကြောင်းကို 1 စတုရန်းကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။
Umm Al-Qaiwain သည်စော်ဘွား၏မြို့တော်၏မြို့, ရှည်လျားကီလိုမီတာ 1 အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ကြီးမားတဲ့ချောင်း5ကီလိုမီတာ encircles သောကျဉ်းမြောင်းသောကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ရုံးခန်း, အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနများ, အဓိကဆိပ်ကမ်းနှင့်ပုစွန်နှင့်ငါးတစ်ခုစမ်းသပ်အခြေခံပေါ်မှာမွေးထားရာ Mariculture သုတေသနစင်တာကဒီမှာတည်ရှိနေကြသည်။ အဆိုပါမြို့ကိုလည်းဟောင်းခံတပ်, ခုခံကာကွယ်အမြောက်များအားဖြင့် flanked က၎င်း၏အဓိကတံခါးဝထိန်းသိမ်းထားအကြွင်းအကျန်ရှိပါတယ်။
Falaj Al-Mualla တစ်ခုဆွဲဆောင်မှုသဘာဝကအိုအေစစ်, 50 ကီလိုမီတာအရှေ့တောင်ဘက်တွင် Umm Al-Qaiwain မြို့၏တည်ရှိသည်။ Sinayah ကျွန်းကမ်းလွန်တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးလဲလျောင်းအတူတကွ Socotra cormorants တစ်မွေးမြူရေးကိုလိုနီနှင့်အတူအရေးကြီးသောဒီရေတောဧရိယာများရှိပါတယ်။
Ras Al-Khaimah, ယူအေအီးရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်အများဆုံးမြောက်ဘက်စော်ဘွား, အရှေ့တောင်ဘက်တွင်ဖို့ Hajar တောင်များ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာသီးခြားကသူ့ရဲ့အတူမြေသြဇာကုန်းတွင်းပိုင်းမြို့တွေမှာလည်းအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုအာရေဗျပင်လယ်ကွေ့အပေါ်အကြောင်းကို 64 ကီလိုမီတာ၏ကမ်းရိုးတန်းရှိပါတယ်။ အိုမန်၏ Sultan နှင့်အတူစော်ဘွားရှယ်ယာနယ်နိမိတ်နှစ်ယောက်စလုံးအစိတ်အပိုင်းများ။ ယင်း၏ပြည်မနယ်မြေထဲအပြင်, Ras Al-Khaimah 1971 ကတည်းကအီရန်ကသိမ်းပိုက် သာ. ကွီးမွတျမြားနဲ့အပြောင် Tunb အပါအဝင်ကျွန်းများတစ်အရေအတွက်, ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ယင်းစော်ဘွားများ၏ဧရိယာကျွန်းများဖယ်ထုတ်ပြီး, တိုင်းပြည်၏စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်း 168 ညီမျှသော 2.2 စတုရန်းကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။
Ras Al-Khaimah မြို့ Khor Ras Al-Khaimah နေဖြင့်နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါသည်။ ဟောငျး Ras Al-Khaimah အဖြစ်လူသိများအနောက်ပိုင်းအပိုင်း၌ Ras Al-Khaimah အမျိုးသားပြတိုက်နှင့်အစိုးရဌာနများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ အယ်လ် Nakheel အဖြစ်လူသိများအရှေ့ပိုငျး, အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ရုံးခန်းအများအပြားအစိုးရဌာနများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများမှရတာဟာ။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုပုဒ်မအဆိုပါ khor ကိုဖြတ်ပြီးတည်ဆောက်ကြီးမားသောတံတားအားဖြင့်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။
Khor Khuwayr Ras Al-Khaimah မြို့၏မြောက်ဘက်မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25 ကီလိုမီတာတည်ရှိပြီးတစ်ခုစက်မှုဇုန်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အဓိကဘိလပ်မြေ, ကျောက်စရစ်နှင့်စကျင်ကျောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပြင်, ဒါ့အပြင်ဆိပ်ကမ်း Saqr များအတွက်တည်နေရာ, အမ်းမရိတ်များအတွက်အဓိကပို့ကုန်ဆိပ်ကမ်းနှင့်သိုးထီးတို့၏ရိုးရာငါးဖမ်းခရိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ Digdagga ခရိုင်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦးလူသိများတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဧရိယာနှင့် Julphar ဆေးဝါးစက်ရုံ, အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့တွင်အကြီးဆုံးရတာဟာ။
အမ်းမရိတ်အတွင်းရှိအခြားအရေးကြီးသောစင်တာများပါဝင်သည်: al-Hamraniah, ကောင်းစွာသည်၎င်း၏ဥယျာဉ်ခြံနှင့်သဘာဝစမ်းလူသိများသော Ras Al-Khaimah အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, Khatt ၎င်း၏အပူစမ်းဘို့ကျော်ကြားသောခရီးသွားအပန်းဖြေစခန်း, Masafi များအတွက်စိုက်ပျိုးရေးစင်တာနှင့်လည်းတည်နေရာ နှင့် Wadi Al-Qawr, တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးတို့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုချိုင့်ဝှမ်း။
Sharjah ပိုင်အချို့အသေးစားလူစု၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, Fujairah အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တလျှောက်တွင်တည်ရှိပြီးတစ်ခုတည်းသောစော်ဘွားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ကမ်းခြေ 90 အရှည်ကီလိုမီတာနှင့်၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကစားထားပါတယ်ထက်ပိုပါတယ်။ ယင်းစော်ဘွားများ၏ဧရိယာကျွန်းများဖယ်ထုတ်ပြီး, တိုင်းပြည်၏စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်း 1165 ညီမျှသော 1.5 စတုရန်းကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။
Fujairah မြို့, အမ်းမရိတ်၏မြို့တော်, အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ရုံးခန်းပါရှိသည်သောလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲစင်တာဖြစ်ပါသည်, အစိုးရဌာနများ, များစွာသောစီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဟိုတယ်တစ်ခုအရေအတွက်အဖြစ်လေဆိပ်နှင့် Fujairah များ၏ဆိပ်ကမ်း, ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရေနံတုတ်ကျင်းများထဲမှ ဆိပ်ကမ်းများ။
ယင်းစော်ဘွားများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ features တွေအခြေချအများစုရာအရပျကိုယူထားပါတယ်ရှိရာမြေသြဇာကမ်းရိုးတန်းလွင်ပြင်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်သောအနီရောင် Hajar တောင်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းနှင့်အတူမင်္ဂလာရှိ Fujairah ကောင်းစွာင်း၏ခရီးသွားကုန်သွယ်ရေးအပျေါမှာတညျဆောဆက်လက်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုအခြို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေငုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ, ထိုတောင်များနှင့်ကမ်းရိုးတန်း၏သဘာဝအလှတရား, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဝင်အထင်ကရနေရာများနှင့်, သင်တန်း, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနေရောင်ခြည်ပါဝင်သည်။
Bidiya များ၏ရွာတိုင်းပြည်အတွင်းရှေးအကျဆုံးသောထူးခြားတဲ့လေးမိုးခုံးဗလီရှိပါတယ်စဉ် Dibba Al-Fujairah ၏သမိုင်းဝင်မြို့, အစော်ဘွား၏မြောက်ပိုင်းအဆုံးမှာ, စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ငါးဖမ်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးပါသောစင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ၏ယူအေအီးစနစ်ကအောက်, ဖက်ဒရေးရှင်းကသမ္မတအစိုးရသောမင်းတို့ရဲ့အဓိပတိကောင်စီအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်။ အဆိုပါအဓိပတိကောင်စီယူအေအီးမှာထိပ်တန်းမူဝါဒအောင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြီး, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတနှစ်ဦးစလုံးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲငါးနှစ်အသုံးအနှုန်းများ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များထံမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသည်။
အဆိုပါအဓိပတိကောင်စီဥပဒေပြုရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးအင်အားကြီးရှိပါတယ်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ ratifying အပြင်၌, အဓိပတိကောင်စီနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အမည်စာရင်းတင်သွင်းန်ကြီးချုပ်ခွင့်ပြုလိုက်သည်နှင့်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, သူ့နှုတ်ထွက်စာကိုလက်ခံဖို့တပ်ဆင်ထားသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကခန့်အပ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ သူသို့မဟုတ်သူမပြီးတော့အစိုးရကိုအားလုံးတွင်လည်းဖြတ်ပြီးဖက်ဒရယ်မူဝါဒ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်, ဝန်ကြီးများ, ဒါမှမဟုတ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့တစ်ကောင်စီခန့်အပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအဓိပတိကောင်စီနှင့်ဝန်ကြီးများကောင်စီများအပြင်၌, ဖက်ဒရယ်အမျိုးသားကောင်စီ (FNC) အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ 40-အဖွဲ့ဝင်ပါလီမန်ကိုလည်းအဆိုပြုထားသောအသစ်သောဥပဒေပြဌာန်းကို examine နှင့်လိုအပ်သည့်အတိုင်း, ယူအေအီးဝန်ကြီးအဖွဲ့မှအကွံဉာဏျပေးစွမ်းသည်။ အဆိုပါ FNC စနစ်မှတာဝန်ခံတစ်ဦးအပိုဆောင်းဒီဂရီများကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် performance ကိုမှကိစ်စတှငျဝန်ကြီးများမခေါ်နဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတက်ဖွင့်လှစ်ရန်သဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု FNC အဖွဲ့ဝင်များ၏ပထမသွယ်ဝိုက်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူဒီဇင်ဘာ 2006 အတွက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကအားလုံး FNC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီစော်ဘွားများ၏အစိုးရသောမင်းတို့ကခန့်အပ်ခဲ့သည်။
source: စော်ဘွား Pintrest
သွယ်ဝိုက်ရွေးကောက်ပွဲများ၏နိဒါန်းအစိုးရ၏ယူအေအီးရဲ့ system ကိုခေတ်မီဖို့လုပ်ငန်းစဉ်၏အစအဦးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလက်အောက်တွင်တစ်ဦးချင်းစီအစိုးရသောမင်းတို့အဘယ်သူ၏အဖွဲ့ဝင်ကြောင်းအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုအားဖြင့်ကျင်းပ FNC အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကို 100 ကြိမ်စုစုပေါင်းအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကောလိပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အခြားတစ်ဝက်တစ်ဦးချင်းစီအနန္တတန်ခိုးရှင်ကခန့်အပ်ခံရဖို့ဆက်လက်စဉ်တစ်ခုချင်းစီကောလိပ်၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှင်, FNC အဖွဲ့ဝင်ထက်ဝက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုယင်း၏အဖွဲ့ဝင်တဦးတည်း-ပဉ္စမအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြသည့်အတွက် FNC ခဲ့သည်။
အနာဂတ်အစပျိုးသည့် FNC ၏အရွယ်အစားကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကြောင်းနှင့်ဝန်ကြီးများကောင်စီအကြားအပြန်အလှန်ခိုင်ခံ့စေနောက်ထပ်ထိရောက်မှု, တာဝန်ခံမှုနှင့်ယူအေအီးအစိုးရ၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်သဘောသဘာဝတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ နိုဝင်ဘာလ 2008 ခုနှစ်, FNC အဖွဲ့ဝင်များအတွက်စည်းကမ်းချက်များကမ္ဘာပေါ်မှာတခြားလွှတ်တော်များနှင့်အတူပိုပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်သောနှစ်ခုမှလေးနှစ်ပေါင်းထံမှတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အစိုးရအဆိုပြုထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့်သဘောတူညီချက်များ ပတ်သက်. FNC မှသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်, အဲဒီသဘောတူညီချက်များ၎င်းတို့၏သဘောတူညီချက်ရေးထိုးခြင်းမပြုမီ FNC ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ, ယူအေအီးရဲ့နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အစိုးရ၏အဖွဲ့အစည်းများအဘို့ကြီးသောချစ်ခင်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကယူအေအီးမကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း၎င်းတို့၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တုန့်ပြန်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယူအေအီးသမိုင်း & အမွေအနှစ်
က Man ရာပေါင်းများစွာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့ယခုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဖြစ်လူသိများပြည်မှ (ယူအေအီး) ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး, အကယ်စင်စစ်ထိုဒေသတွင်အာရှသို့အာဖရိကထဲကအစောပိုင်းလူသား၏ရွှေ့ပြောင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားကြပေမည်။ အချိန်ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတယ်။ 7500 နှစ်ပေါင်းဝန်းကျင်လွန်ခဲ့သောရာသီဥတုအတော်လေးညင်သာပျော့ပျောင်းခဲ့တယ်နှင့်လူ့သိမ်းပိုက်၏သိသာထင်ရှားသောသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိ, ဒါပေမယ့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3000 ဘီစီအခြေအနေများစိုက်ပျိုးရေးခိုင်ခံ့သောအိုအေစစ်အသိုင်းအဝိုင်းအကြီးအကျယ်ချုပ်ထားသောရလဒ်နှင့်အတူအများကြီးပိုမိုးနည်းရေရှားဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကုန်စည်ဒိုင်ကုန်သွယ်အနေနဲ့အစောပိုင်းအဆင့်အနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်နှင့်ကြေးနီကပိုတေးမီးယားမှတင်ပို့ခဲ့သည်ရှိရာကနေ, အဖြစ်အစောပိုင်း 3000 ဘီစီအဖြစ်မြောက်ဘက်တွင်မြို့ပြစင်တာများဖို့ Hajar တောင်တန်းကနေပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ မြောက်မှတောင်သို့ဒေသတွင်းမှတဆင့်ကုလားအုပ်ယာဉ်တန်းလမ်းကြောင်းကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Julfar (Ra ရဲ့ Al-Khaimah) အဖြစ် ports နောက်ဆုံးမှာ, အဓိကအားပုလဲကုန်သွယ်ရေးမှကျေးဇူးတင်စကားဖွံ့ဖြိုးစည်ပင် entreports ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါတစ်ဆယ့်ခြောက်ရာစုတှငျပင်လယ်ကွေ့အတွင်းပေါ်တူဂီ၏ဆိုက်ရောက်ထိုကဲ့သို့သော Dibba, Bidiyah, Khor Fakkan နှင့် Kalba အဖြစ်အရှေ့ကမ်းနားဆိပ်ကမ်းများအဘို့အဓိကပြတ်တောက်စေ၏။ ပင်လယ်ကွေ့နှင့်အိန္ဒိယအကြားရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများထိန်းချုပ်ရန်ဗြိတိန်ထိုးစစ်နှိုးဆော်ခြင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ - သို့သော်လည်းကိုးရာစုအစအဦး, တစ်ဦးကိုဒေသခံအနွယ်အားဖြင့်, Qawaisim, ခြောက်ဆယ်ကျော်ကြီးမားသောရေယာဉ်များနှင့်နီးပါး 20,000 သင်္ဘောသားတစ်ဦးစင်းကိုညျဆောကျခဲ့သညျ။
အရင်းအမြစ် ဟောငျးဒူဘိုင်း၏ Souk
အစောပိုင်း 1790s အသုံးပြုပုံဘူဒါဘီမြို့ဟာဗာနိ yas အမျိုးအနွယ်များ၏ခေါင်းဆောင်, (အဘယ်သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်အယ်လ် Nahyan, အဘူဒါဘီ၏ပစ္စုပ္ပန်သောမင်းတို့ဖြစ်ကြသည်) ကအယ်လ်ဘူ Falah ၏ Sheikh ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါသော Pearling စင်တာဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း, အဆိုပါ Liwa အိုအေစစ်ကနေအဲဒီမှာပြောင်းရွေ့အချို့ 150 တောင်ဘက်-အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ။ တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အယ်လ်ဘူ Falasah, ထိုဗာနိ yas ၏အခြားဌာနခှဲကအဖွဲ့ဝင်များ, သူတို့အယ်လ် Maktoum မိသားစုအဖြစ်ယနေ့အုပ်ချုပ်ဖို့ဆက်လက်ဘယ်မှာဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ချောင်းဖြင့်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
ပုလဲငါးဖမ်းလန်းဆက်လက်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာပထမကမ္ဘာစစ်, အ 1930s များ၏စီးပွားရေးစိတ်ကျရောဂါနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပုလဲ၏ဂျပန်တီထွင်မှုကုန်သွယ်မှုကျဆင်းစေ - ထိုဒေသ၏စီးပွားရေးအပေါ်တစ်ဦးအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ။
အဆိုပါ 1950s နှင့်အတူ, သို့သော်ရေနံ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု လာ. ,6သြဂုတ်လ 1966 အပေါ်သူ၏မြင့်မားခြင်း (နာရီ) ရှိတ် Zayed bin Sultan Al-Nahyan အဘူဒါဘီ၏အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပြင်းထန်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတဲ့ကာလစတင်ခဲ့ပြီးမထွက်ရအဘူဒါဘီနှင့်နောက်ဆုံးမှာတစ်ခုလုံးကိုယူအေအီး, ခေတ်မီရေးနှင့်စီးပွားရေးအစွမ်းသတ္တိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာနှင့်အတူတက်ဖမ်းလာတယ်။2ဒီဇင်ဘာလ 1971 တွင်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဖြစ်လူသိများခြောက်လပြည်နယ်များတစ်အခြေခံဥပဒေအဖွဲ့ချုပ်တရားဝင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသည်အဘူဒါဘီ, ဒူဘိုင်း, Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaiwain နှင့် Fujairah ပါဝင်သည်။ ရှိတ် Zayed ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်နာရီရှိတ် Rashid bin ကို Saeed Al Maktoum, ဒူဘိုင်း၏အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သတ္တမစော်ဘွား, Ra ရဲ့ Al-Khaimah, 1972 အတွက်အဖွဲ့ချုပ်မှဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဒေသ၏စတင်တည်ထောင်သူသညျဘိုးဘေးတို့ကကစားခဲ့သည့်ပုံအခန်းကဏ္ဍကြောင့်အလွန်ကြီးသောအတိုင်းအတာအထိယူအေအီးရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်သောယနေ့သာယာဝပြော, သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသံသယ, ရှိပါသည်။ 2004 ခုနှစ်တွင်ရှိတ် Zayed ကသူ့သားအကြီးဆုံး, နာရီရှိတ်ခါလီဖာဘင် Zayed Al-Nahyan နေဖြင့်ယူအေအီးကသမ္မတအဖြစ်နှင့်အဘူဒါဘီ၏အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သည်။ သူကအစိုးရမှဆောင်ခဲ့သောအခြေခံမူများနှင့်အတွေးအခေါ်, သို့သော်, ယနေ့အဖွဲ့ချုပ်နှင့်၎င်း၏မူဝါဒများ၏စိတ်နှလုံးမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ သူ့အစ်ကို, 2006 အတွက်ရှိတ် Maktoum, နာရီရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum, ဒူဘိုင်း၏အနန္တတန်ခိုးရှင်၏အသေခံခြင်းတွင်အောက်ပါယူအေအီးဒုသမ္မတနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
ရင်းမြစ်: UAE2010 နှစ်ချုပ်စာအုပ် - ယူအေအီးအမျိုးသားမီဒီယာကောင်စီ
ယူအေအီးရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဟာအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်သမ္မတ, နာရီရှိတ် Zayed bin Sultan Al-Nahyan ကတည်ထောင်ခဲ့သည့်ကျယ်ပြန့်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမူဘောင်အတွင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်သံတမန်ရေး, ညှိနှိုင်းမှုနဲ့သနားကရုဏာအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ယူအေအီးအလုံးစုံတို့အဘို့ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေး, တည်ငြိမ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်. ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်းမှ၎င်း၏ကတိကဝတ်အောက်မေ့သည်။ ဤရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်တံတားများ, မိတ်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဤ tools များအပေါ်မှီခိုအစိုးရနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူထိရောက်သောမျှတခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်-အထိဆက်ဆံရေးကိုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ယူအေအီးနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၏တစ်ဦးကလမ်းညွှန်မူအရသည်အခြားတပါးအမျိုးသားတို့၏အချုပ်အခြာအာဏာရေးရာများတွင် Non-်ရောက်စွက်ဖက်၏နိယာမကိုလေးစား၏လိုအပ်ချက်အပါအဝင်ပြည်နယ်များအကြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရာတွင်တရားမျှတမှုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းအတွက်ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးလည်းအငြင်းပွားမှုများ၏ငြိမ်းချမ်းသော resolution ကိုမှကျူးလွန်သည်နှင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်စည်းဝေးကြီးများနှင့်စာချုပ်များအကောင်အထည်ဖော်ရေး၏အုပျခြုပျအားဖြည့်ရန်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထောက်ခံ။
ယူအေအီးရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၏အဓိက features တွေတခြောက်အဖွဲ့ဝင်ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ (GCC) မှတဆင့်အာရေဗျကျွန်းဆွယ်အတွက်၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ 2009 စဉ်အတွင်းပါလက်စတိုင်း, အီရတ်, အီရန်, ယီမင်, အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်ပါကစ္စတန်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သောအစပျိုးကမ္ဘာကြီးခေါင်းဆောင်များနှင့်ယူအေအီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏အဓိကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယူအေအီးငြိမ်းချမ်းရေး, လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုအာရပ်ဒေသတွင်အဖြစ်နိုင်ငံအားလုံးတို့တွင်အဆက်ဆံရေးပုံမှန်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းပဋိပက္ခတစ်ရုံနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖြေရှင်းချက်ထံအပ်နှံသည်။ ဒါဟာပါလက်စတိုင်းနှင့်အခြားအာရပ်နယ်မြေများ၏အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ဆက်လက်နေချိန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်မရနိုငျကယုံကြည်သည်။ ဒါဟာအာရပ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု Initiative အပေါ်အခြေခံပြီးသဘောတူညီချက်များ၏အခြေအနေတွင်အတွင်း၎င်း၏မြို့တော်အဖြစ်အရှေ့ဂျေရုဆလင်နှင့်အတူအစ္စရေးသိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောပါလက်စတိုင်းပြည်နယ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအဆုံးသတ်ထောက်ခံပါတယ်။
ယူအေအီးထပ်တလဲလဲအရှေ့အလယ်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်လေလံအတွက်အနောက်ဘဏ်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ဂျူးအခြေချနေထိုင်မှုများဆောက်လုပ်ရေးအေးခဲနိုင်ငံတကာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ဤအတောအတွင်းကဂါဇာအစ္စရေးကျူးကျော်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့်စစ်ကြောင့်ထိခိုက်ပါလက်စတိုင်းနှင့်အတူသွေးစည်းညီညွတ်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ယူအေအီးအခြေခံအဆောက်အအုံ, အိုးအိမ်, ဆေးရုံနှင့်ကျောင်းစီမံကိန်းများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေများအပါအဝင်ပါလက်စတိုင်းမှအကူအညီအတွက် Dh11 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 3bn) ကျော်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံတွင်းဂါဇာအတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုဦးတည် Dh638.5 သန်း (အမေရိကန် $ 174mn) လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ယူအေအီးအီရတ်အစိုးရတစ်ခုတက်ကြွစွာထောက်ခံအားပေးသူခဲ့နဲ့အီရတ်၏နယ်မြေသမာဓိရှိဘို့လေးစားမှု၎င်း၏အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်လွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်တွန်းလိုက်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့ချုပ်မှဘဂ္ဂဒက်အတွက်အနည်းငယ် functioning အာရပ်သံရုံးနှင့်နေထိုင်သူသံအမတ်ကြီးတစ်ဦးရှိပါတယ်, နှင့်အီရတ်ရဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့ Dh25.69 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 7bn) အကြောင်းကိုတန်ဖိုးရှိအကြွေးတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ သုံးသိမ်းပိုက်ယူအေအီးကျွန်းများနှင့်အီရန်နိုင်ငံ၏နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏မေးခွန်းကိုအပေါ်အီရန်နှင့်အတူကြာမြင့်စွာ-running အငြင်းပွားမှုနေသော်လည်းယူအေအီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါငျးတို့သ channel များကိုပွင့်လင်းထားရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအတိုင်းအတာများနှင့်အားလုံးတစ်ဦးငြိမ်းချမ်းသော resolution ကိုများအတွက်ယန္တရားဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ထူးချွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ အဆိုပါအဖွဲ့ချုပ်မှအာဖဂန်နစ္စတန်တည်ငြိမ်နှင့်လုံခြုံရေး restore ရန်၎င်း၏လေလံထောက်ပံ့ရည်ရွယ်သည့်နိုင်ငံတကာအားထုတ်မှုမှအပြုသဘောနဲ့အထောက်အကူပေးဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 550 နှင့် 2002 အကြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများအတွက်အမေရိကန် $ 2008 သန်းထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အာဖဂန်နစ်စတန်အတွက်မြေပြင်ပေါ်တွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလှုပ်ရှားမှုများဖျော်ဖြေတစ်ခုတည်းသောအာရပ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ဒေသတွင်းသူ့ဟာသူတဘက်, ယူအေအီးရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နေသောလိုက်လျောညီထွေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဆက်လက်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာက၎င်း၏ရိုးရာမဟာမိတ်များနှင့်ဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားစဉ်က၎င်း၏လက်တွေ့ကျကျချဉ်းကပ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်နှစ်ခုလုံးကိုစက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့်အတူနှစ်နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံစုံဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နေသည်။ ယူအေအီးရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၏အရေးပါသောအသှငျအပွငျကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအခြားနိုင်ငံများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူစီးပွားရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလင့်များတစ်ခုတိုးချဲ့မွေးမြူအပေါ်အထူးအလေးပေးဖော်ပြထား။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခုဘဏ္ဍာရေးအချက်အချာနေရာအဖြစ်အသင်းချုပ်ရဲ့အစာရှောင်ခြင်း-ဖွံ့ဖြိုးဆဲအနေအထားနောက်ထပ်ခဲနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားကိုခိုင်ခံ့စေ၏ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အာရှသည်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများထက်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကိုပိုမိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သောကြောင့်အာရှတိုက်ရှိအချို့သောနိုင်ငံများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပိုမိုသြဇာညောင်းသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်လိမ့်မည် နိုင်ငံရေး။ ဤပြောင်းလဲမှုကိုစုပ်ယူလိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်မှုများပိုမိုခိုင်မာလာစေလိုသောဆန္ဒကိုထင်ဟပ်ခြင်း၊ ယူအေအီးမှခေါင်းဆောင်များသည်တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့အပါအဝင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေးကို ဆက်၍ တိုးတက်ခဲ့သည်။ 2009 ၏နိုင်ငံတကာသံတမန်ရေးရာအောင်မြင်မှုသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IRENA) ၏ရုံးချုပ်ကိုအဘူဒါဘီရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ယူအေအီးအရပ်သား, အသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏ပွင့်လင်းမူဝါဒများနှင့်အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအစီအမံများလိုက်နာဖို့အသငျ့အလေးပေးများအတွက်နျူကလီးယားစွမ်းအင်အပေါ်တစ်ဦးမူဝါဒကစာရွက်စာတမ်းထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ဤအတောအတွင်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ၏ဘုတ်အဖွဲ့နျူကလီးယားက Non-ပြန့်ပွားစာချုပ်ရန်ကတိကဝတ်သေချာသည့်နောက်ထပ်ပရိုတိုကော, အဖြစ်လူသိများသည့်အပိုဆောင်းနျူကလီးယားစစ်ဆေးရေးအစီအမံ၏ယူအေအီးရဲ့သဘောတူညီချက်ရေးထိုးအတည်ပြုခဲ့သည်။ ယူအေအီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏နောက်ထပ် key ကိုဧရိယာ State-sponsored ကြောက်မက်ဘွယ်သောအခြင်းအပါအဝင်အကြမ်းဖက်ဝါဒဆန့်ကျင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရန်ပွဲအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒေသ၏စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအပေါ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း၏သက်ရောက်မှုများကြားမှ, ယူအေအီးနိုင်ငံအများအပြားအတွက်၎င်း၏လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု, ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအမှု၌၎င်း၏အားထုတ်မှုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်လူ့ပဋိပက္ခများအတွင်းကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပြည်သူများ၏ဆင်းရဲဒုက္ခလျှော့ချအတွက်၎င်း၏လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရပ်တည်ချက်နှင့်အလုပ်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
AIDS ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ 2009 စဉ်အတွင်း, မော်ရိုကို, Burkina Faso, တန်ဇန်းနီးယား, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ပါလက်စတိုင်း, ဘီနင်, ယီမင်, အာဖဂန်နစ္စတန်, ဆူဒန်, အီရီထရီးယားနှင့်အခြားသူများအတွက်စီမံကိန်းများကိုထောက်ခံသည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက်အဘူဒါဘီရန်ပုံငွေအဖွဲ့အဖြစ်သော့ချက်အဖွဲ့အစည်းများ, တစ်အရေအတွက်ကတဆင့်လျက်ရှိ၏ အဘယ်သူ၏အထိရောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများ, မိုးခေါင်ခြင်းနှင့်သဲကန်တာနေဖြင့်ဝင်တိုက်သည့်နိုင်ငံများရှိသောက်သုံးရေထောက်ပံ့နွဲ့သောနိုင်ငံများဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများရှိဆေးရုံများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပါသည်ပါဝင်သည်အဆိုပါလခြမ်းနီအာဏာပိုင် (ကြက်ခြေနီနိုင်ငံတကာကော်မတီရဲ့ထိပ်တဆယ်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်း), ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအတွက်သားသမီးများ၏ပညာရေးအပေါ်အဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Noor ဒူဘိုင်း, မျက်စိကွယ်ခြင်းနှင့်နိမ့်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုသိုလ်ဖြစ်ပဏာမခြေလှမ်း, မျက်စိကန်း၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့်နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အလေးပေးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်ပဋိပက္ခနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့်ထိခိုက်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားယူအေအီး Dh255 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 69.4 ဘီလီယံ) ထက်ပိုလှူဒါန်းခဲ့သည့်နောက်ဆုံးသုံး-and တစ်နှစ်ခွဲဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းချေးငွေများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေများနှင့်အကူအညီများအစိုးရ-to-အစိုးရအပျေါအခွခေံသည်, ထိုအဖွဲ့ချုပ်မှလည်းဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှတစ်ဆင့် Dh100 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 27 ဘီလီယံ) ရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီးမှ, နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများမှအဓိကပံ့ပိုး။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာညှိနှိုင်းရေးကုလသမဂ္ဂရုံးနှင့်ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ယူအေအီးနိုင်ငံခြားရေးအကူအညီပေးရေးညှိနှိုင်းရေးရုံးသည်, ဖက်ဒရေးရှင်းနေတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံအဆင့်အထိအကူအညီများပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာထက်အစဉ်အလာနှစ်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့်ထောက်ခံမှုအာရုံစိုက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကထူထောင်ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် နည်းလမ်းများ။
ယူအေအီးပုံမှန်ပြန်လည်နာလန်ထူလမ်းကြောင်းအပေါ်ယခုဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, ကသိသိသာသာမကြာသေးခင်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ရေနံစျေးနှုန်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအနေနဲ့ကနဦးခေါငျးအုံးသို့ရာတွင်ထိုအဖွဲ့ချုပ်မှနောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ဇူလိုင်လ 2008 အထွတ်အထိပ်၏တတိယထက်လျော့နည်းဖို့စျေးနှုန်းများဆွဲ, ရေနံဝယ်လိုအားအတွက်အခုထက်မှဦးဆောင်သောနက်ရှိုင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျဆင်းမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကအရင်းအနှီး၏ကြီးမားသောရောက်လာ၏ပြောင်းပြန်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများတွင်တစ်ဦးချွန်ထက်ကျဆင်းမှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍများတွင်တစ်ဦးကျဆင်းမှု, ယူအေအီးစီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှု၏အဓိက, 2009 အတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုဆင်းသိသိသာသာယခင်နှစ်ပေါင်းထံမှဖွစျကွောငျးကိုဆိုလိုသညျ။ အောက်တိုဘာလ 2009 များတွင်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနယခုနှစ်များအတွက်ရာခိုင်နှုန်းပဲ 1.3 ၏တိုးတက်မှုနှုန်းခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
2009 များအတွက်ကိန်းဂဏန်းများယူအေအီးစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များတွင်တိုးတက်မှုနှုန်း (ဂျီဒီပီ) ရာခိုင်နှုန်း 2008 ရောက်ရှိသည့်အခါ 7.4 များအတွက်သူတို့နှင့်အတူသိသိသာသာကှာခွားခရှိကြ၏။ ကြောင်းမြင့်တက်ဦးဆောင်အဓိကအားဖြင့်ရေနံစျေးနှုန်းတွေထဲမှာတိုးမှုကြောင့်ရာခိုင်နှုန်း 35.6 အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍ, ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2008 အခြားအားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကဏ္ဍများတွင်ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း (ရာခိုင်နှုန်း 26.1) ပါဝင်သည်, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများ (ရာခိုင်နှုန်း 17.2), ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍမှာ (ရာခိုင်နှုန်း 15.9), အလက္ကားလက်လီကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပြုပြင်န်ဆောင်မှုများ (ရာခိုင်နှုန်း 18.7), နှင့်စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဟိုတယ်ကုန်သွယ်ရေး (ရာခိုင်နှုန်း 15.1) ။
2008 ခုနှစ်, ယူအေအီးရဲ့ကုန်သွယ်ရေးချိန်ခွင်လျှာ Dh35.3 ဘီလီယံအထိအကြီးအကျယ်တင်ပို့မှုနှင့် re-တင်ပို့မှု၏တန်ဖိုးအတွက်ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာနှုန်းဟာ 170.85 ကြောင့် Dh46.5 ဘီလီယံ 2007 (အမေရိကန် $ 231.09), အတွက် (အမေရိကန် $ 62.9 ဘီလီယံ) မှရာခိုင်နှုန်း 33.9 တိုး နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှု၏တန်ဖိုးအတွက်ရာခိုင်နှုန်းတိုးနှုန်းဟာ 39.7 နှင့်အတူ coupled ရေနံတင်ပို့မှု၏တန်ဖိုးအတွက်ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာနှုန်းဟာ 37.1 ။ အခမဲ့ကုန်သွယ်ရေးဇုန် 16.4 အတွက် Dh97.46 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 26.6 ဘီလီယံ) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်ရသောပို့ကုန်အတွက်ရာခိုင်နှုန်းတိုးနှုန်းဟာ 2008 ကိုငါမြင်၏။ ဤအတောအတွင်း re-ပို့ကုန် DH 345.78 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 94.2 ဘီလီယံ) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်; ရာခိုင်နှုန်း 33.4 တစ်ဦးမြင့်တက်။ အတူတကွပြန်လည်တင်ပို့ကုန်သွယ်မှုအတွက်တစ်ဦးအပြုသဘောကြီးထွားအတူကြောင့်လူဦးရေနှင့်ဝင်ငွေအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးမြှင့်ပေးရန်ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားမြင့်တက် Dh33.4 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 735.70 ဘီလီယံ) ရောက်ရှိဖို့ရာခိုင်နှုန်း 200.4 နေဖြင့်သွင်းကုန်တန်ဖိုးတက်တွန်းအားပေးကူညီပေးခဲ့သည်။
2009 ၏ပထမဦးဆုံးတကျိပ်တပါးသောလများတွင်ငွေဖောင်းပွမှုသည်ယခင်နှစ်ပေါင်းထံမှရာခိုင်နှုန်း-Down သိသိသာသာနှုန်း 1.7 မှာရပ်နေ၏။ အနိမ့်အိမ်စျေးနှုန်းများနှင့်အစားအစာကုန်ကျစရိတ်စီးပွားရေးအတွက် deflationary ဖိအားမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရေနံစျေးနှုန်းများအနေဖြင့်သိသိသာသာင်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ရှားပါးမှုအတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုလောင်စာအဖြစ် 2008 မှာတော့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုရာခိုင်နှုန်း 10.8 မှာရပ်နေ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အဆီးအတားမရှိအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာနှင့်အဆင့်မြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားနပ်ရိက္ခာစျေးနှုန်းများတင်သွင်းမှုကိုပိုမိုစျေးကြီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယူအေအီးဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဖော်ပြထားသည့်မူဝါဒစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်အနိမ့်အဆင့်ဆင့်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကအတိုးနှုန်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
non-ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ကဏ္ဍများတွင်စီးပွားရေး DH 63 ထရီလီယံ (အမေရိကန် $ 2008 ဘီလီယံ) အထောက်အကူပြုမြင့်မားတဲ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းများရှိနေသော်လည်း 2.16 အတွက်ဂျီဒီပီ၏ရာခိုင်နှုန်း 590 အဘို့မှတ်။ ယူအေအီးတခြားနေရာစီးပွားရေးအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်နေဖြင့် 20 နှစ်လာမည့်တဆယ်အတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15 ရာခိုင်နှုန်းရန်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ကဏ္ဍ၏အလှူငွေလျှော့ချရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလူမီနီယံရောစပ်, ကြွေထည်နှင့်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောပြီးသား-အောင်မြင်ကဏ္ဍများအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်း, စီးပွားရေးအသွင်ပြောင်းများအတွက်အသင်းချုပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ဆက်လက်။
2009 မှာတော့အဘူဒါဘီ သာ. ကြီးမြတ်သည်စီးပွားရေးအမျိုးမျိုးများအတွက်လမ်းပြမြေပုံကိုထုတ် setting ၎င်း၏ 2030 စီးပွားရေးဇုန် Vision ၏ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Mubadala ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ, အဘူဒါဘီအစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်မောင်း, aerostructure အတွက်စီမံကိန်းများကို (လေယာဉ်ပျံ airframe အစိတ်အပိုင်းများ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, စီးပွားဖြစ်ဘဏ္ဍာရေး, စွမ်းအင်နှင့်အပန်းဖြေအပါအဝင်ဒေသတွင်းစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ, ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘူဒါဘီကိုလည်းစွမ်းအင်နှင့် Masdar ဤနည်းဗျူဟာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အစိုးရကပိုင်ဆိုင်သည့်အနာဂတ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲသတင်းရင်းမြစ်ကိုအာရုံစိုက်နေသည်။ ကုမ္ပဏီ '' ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး Carbon-ကြားနေသုည-စွန့်ပစ်မြို့နှင့်နိုင်ငံတကာ Renewable Energy အေဂျင်စီ (IRENA) ၏ဌာနချုပ် '' အဖြစ်ဖော်ပြပေးသော Masdar စီးတီး, နောက်ဆုံးမှာ 40,000 နေထိုင်သူများနှင့်အချို့သော 50,000 အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ် 1500 နေ့စဉ်သွားလာမှုခရီးစဉ်အမျိုးမျိုးပါလိမ့်မယ်။ Masdar လည်း 130 မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်ရန်နှစ်စဉ်အလုံအလောက်ပြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအဘူဒါဘီအတွက်အပင်တစ်ပင်၏ဆောက်လုပ်ရေးပါဝင်သောပါးလွှာ-ရုပ်ရှင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြားများ၏အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောနည်းပညာ, အတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်ပါတယ်
ဒူဘိုင်းသည်၎င်း၏အဓိကအစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကုမ္ပဏီအချို့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတို့တွင်အားသာချက်များကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Sharjah သည်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်။ Ra's al-Khaimah Investment Authority (RAKIA) သည်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများ စုပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းရန်စက်မှုဇုန်များဆိုင်ရာအယူအဆတစ်ခုကိုစတင်ရန်စီစဉ်နေသည်။ Fujairah သည်ယူအေအီး၌ပထမဆုံးသော virtual virtual zone ကိုထူထောင်သည်။ ၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအားခွင့်ပြုလိမ့်မည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ထူထောင်အခမဲ့ဇုန်များကတရားစွဲဆိုထက်လျော့နည်းသည်။ ထို့အပြင်ယူအေအီးအစိုးရသည်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခြင်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည်အမျိုးသားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖန်တီးမှုကိုအားပေးလိမ့်မည်။
အများအပြားကအဓိကစီမံကိန်းများကို 2009, အများဆုံးအထင်ကြီးဖြစ်ခြင်း yas ကျွန်း, နိုဝင်ဘာလ 2009 အတွက်ဖော်မြူလာတစ်ခုမှာ Grand Prix တည်ခင်းဧည်သော yas Marina circuit ကိုမှအဘူဒါဘီနှင့်အိမ်ရှိတစ်ဦးအားလပ်အပန်းဖြေစခန်းတွေထဲကခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Dh28 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 7.62 ဘီလီယံ) ဒူဘိုင်းမီထရိုသည်စော်ဘွား၏စိတ်နှလုံး spanning အဆိုပါမောင်းသူမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး system အပါအဝင်ပြီးစီးခဲ့ဘယ်မှာဗိုလ်မှူးအခြေခံအဆောက်အအုံအစီအစဉ်များ; Saadiyat နှင့် yas ကျွန်းနှင့်အတူအဘူဒါဘီကျွန်းချိတ်ဆက်ရှိတ်ခါလီဖာတံတား, နှင့်အုန်း Jumeriah တစ်လိုင်းပြေးရထား။ ကမ်ဘာပျေါမှာအမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦ; ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Burj Khalifa, 2010 ၏ပထမအပတ်အတွင်းဖွင့်လှစ်။
ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုယူအေအီးစီးပွားရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ကြီးထွားကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းနှစ်ဦးစလုံးချုပ်အရည်အသွေးဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေအပန်းဖြေအာရုံစိုက်, rebranding လေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်ဝင်ကြပြီ။ အနောက်တိုင်းအဘူဒါဘီ, အ Liwa အိုအေစစ်အတွက် Qasr Al-Sarab ၏သဲကန္တာရ hideaways နှင့်အယ်လ်မဟာနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက် Bab Al-ရှမ်းစ်အတွက်ဆာဗာနိ yas ၏အပူပိုင်းကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းထံမှ Fujairah များ၏ကောင်းမွန်စွာ sited ကမ်းရိုးတန်းအပန်းဖြေဖို့, Ra ရဲ့အယ်လ် Khaimah နှင့် Ajman, ယူအေအီးတချို့ဝေးလံခေါင်သီပြီးလှပနေရာများတွင်ထိပ်တန်းအဆောက်အပေးထားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစော်ဘွား Palace ဟိုတယ်၌, Burj al-Arab, Madinat Jumeirah, နှင့် Bruj Khalifa အဖြစ် flagship စီမံကိန်းအဖွဲ့ချုပ်ဧည့်သည်များပင်အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိကြောင်းရလဒ်နှင့်အတူတိုင်းပြည်များ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုမြှင့်ဖို့ကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။ သန်း 11.2 ကျော်ဧည့်သည်များအတွက်ဧညျ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရန်ယူအေအီးရဲ့ကြိုးစားမှု၏အောင်မြင်မှုကိုကျောထောက်နောက်ခံ, 2010 အတွက်မျှော်လင့်ရသည်။
2009 ခုနှစ်, ယူအေအီးကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကပြုစုသည့် '' ပွုလုပျခွငျးစီးပွားရေး '' အစီရင်ခံစာတွင်တိုင်အောင်တဆယ်လေးသောအရပ်တို့ကိုမတက်။ အဆိုပါနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုအစီရင်ခံစာအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သွားရန်ထိုသို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူသောအပေါ်နိုင်ငံများတွင်အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့ချုပ်မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချို့ start-up စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တစ် Dh150,00 (အမေရိကန် $ 40,871) နိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက်များကိုဖျက်ပယ်ရန်အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်၏ရလဒ်အဖြစ်, စည်းမျဉ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာသုံးဆယ်-တတိယအနေအထားမှထ။
ယူအေအီး၏မြင့်တက်လာမှုအတွက်အခြားအဓိကအကြောင်းနှစ်ချက်မှာဆောက်လုပ်ရေးပါမစ်များရရှိခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည် ဒူဘိုင်းမှာ ဆိပ်ကမ်းများ။
နိုင်ငံခြားစျေးကွက်များ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ယူအေအီး၏အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်လုံခြုံမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးရန်မဟာဗျူဟာမြောက်မောင်းနှင်အားအဖြစ်ကာလရှည်ကြာစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ Emirates ရှိနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့များတွင်အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာဏာပိုင်၊ အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်စီ၊ Invest အေဒီ၊ ဒူဘိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဒူဘိုင်း Holding၊ Dubai Holding ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ (Dubai Properties Group၊ Sama Dubai, Tatweer) တို့ပါဝင်သည်။ Duabi Holding Investment Group နှင့် Dubai World တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Mubadala, အဘူဒါဘီအမျိုးသားစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ (Taqa) နှင့် နိုင်ငံတကာရေနံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ (IPIC) သည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ယူအေအီးဗဟိုဘဏ် Dh2008 ဘီလီယံ (အမေရိကန် $ 50 ဘီလီယံ) ဒေသခံငွေချေးကိုထောကျပံ့ဖို့စက်ရုံ, နှင့်ဘဏ္ဍာရေး Dh13.6 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 70 ဘီလီယံ) ၏ယူအေအီးန်ကြီးဌာနငွေဖြစ်လွယ်အပါအဝင်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အတွက်ယုံကြည်မှု restore လုပ်ဖို့ 19 အတွက်ဖက်ဒရယ်အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခြေလှမ်းများ, ထောက်ခံမှုအစီအစဉ်, ငွေချေးပွနျလညျရှငျစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက် buoy နှင့်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုထပ်တိုးပေးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ 2008 ခုနှစ်, ဖက်ဒရယ်အစိုးရကိုလည်းအများအပြားချေးငွေအစီအစဉ်များအောက်တွင်တိုင်းပြည်အနှံ့ဘဏ်များမှမရရှိနိုင် Dh120 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 32.7 ဘီလီယံ) အထိဖြစ်စေလျက်, သုံးနှစ်အဘို့သိုက်နှင့် interbank ချေးငွေအာမခံမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 များတွင်ဘဏ္ဍာရေးအဘူဒါဘီဦးစီးဌာနစော်ဘွားရဲ့အကြီးမားဆုံးဘဏ်များ၏ငါးခုသို့ Dh16 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 4.35 ဘီလီယံ) ထိုးသွင်း။ ဘဏ်အမြတ်အစွန်းပထမသုံးလပတ်အတွက်ကျဆင်းသွားနှင့်အရေးပေါ်ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီကငွေချေးကိုထောကျပံ့ဖို့နောက်ထပ်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုစဉ်းစားရန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကထူထောင်ခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်းဤဆောင်ရွက်ချက်များ, ဘဏ်များမှာချိန်ခွင်လျှာစာရွက်များကိုတက်ခိုင်မာအောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ယခုနှစ်ကာလအတွင်းဘဏ်များရဲ့ default တန်ဖိုးတစ်ခုတိုးအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူချေးငွေအပေါ်ငွေပေးချေမှုလွဲချော်။ ရလဒ်အဖြစ်ယူအေအီးရဲ့စာရင်းဘဏ်များမကောင်းတဲ့ချေးငွေများဆန့်ကျင် Higher-ထက်ပုံမှန်အတိုင်းစီမံလုပ်ကိုင်မှုကိုအစီရင်ခံကသတိထားချဉ်းကပ်ကိုယူ။ ဘဏ်စနစ်အတွက်အပိုမြို့တော်-ကူရှင်နှင့်အတူကူညီပေးဖို့, ဗဟိုဘဏ် 2010 ကနေသူတို့ဘဏ်တွေများအတွက်အရင်းအနှီးလုံလောက်မှုအပေါ်ဘေဆယ် II ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုက်နာရမည်နှင့်အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ပိုပြီးအာရုံစိုက်ကြောင်းငွေချေးညွှန်ကြားထား။ အစိုးရကိုလည်းစော်ဘွား '' နှစ်ဦးကိုအကြီးမားဆုံးအပေါင်ခံငွေချေး, Amlak နှင့် Tamweel ပေါင်းစည်းရန်အစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ ဒါကအိမ်ရာဈေးကွက်တွင်တစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။
အစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းစုကြီးများအားဖြင့်စျေးကွက်မှရရှိသောချေးငွေများ၏ပြန်ဆပ်လည်း 2009 အတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 မှာတော့ဒူဘိုင်း၏အစိုးရသည်၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီများမှအကြွေးငွေပေးချေစေနှင့်ကန်ထရိုက်တာများပေးဆောင်ကူညီရန်ဗဟိုဘဏ်မှငွေချေးစာချုပ်ထဲမှာ Dh36.7 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 10 ဘီလီယံ) ရောင်းချခဲ့သည်။ ဤအရန်ပုံငွေများ၏ဖြန့်ဖြူးကြီးကြပ်ရန်, ဒူဘိုင်းဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့ရံပုံငွေဇူလိုင်လ 2009 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ 25 နိုဝင်ဘာလ 2009 တွင်ဒူဘိုင်းအစိုးရကအဘူဒါဘီရဲ့အကြီးဆုံးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဥစ္စာဓနရန်ပုံငွေများထဲမှထိန်းချုပ်ထားကြသည်နှစ်ဦးစလုံး၏အမျိုးသားဘဏ်အဘူဒါဘီနှင့် Al Hilal ဘဏ်ထံမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက် Dh18.4 သန်း (အမေရိကန် $5ဘီလီယံ) အထိစီတန်းခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်, အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်စီ။ ဒူဘိုင်းကိုလည်းအောင်မြင်စွာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလဲလှယ်အော်ပရေတာ Borse ဒူဘိုင်းရဲ့ကြွေးမြီ၏ refinancing နှင့် Dh2009 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 12.47 ဘီလီယံ) ၏ပြန်ဆပ်ဒူဘိုင်းလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်တစ်ဦး Dh3.4 ဘီလျံ (အမေရိကန် $ 3.67 ဘီလီယံ) အပါအဝင် 1 အတွက်ကြီးမားတဲ့ကြွေးမြီ၏နံပါတ်, စီမံခန့်ခွဲ နိုဝင်ဘာလအတွက်အစ္စလာမ့်နှောင်ကြိုး။
ဒူဘိုင်းဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အပေါ်စာရင်းဝင်ထိတ်ခတ်ယခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်း 10.2 တက်အဆုံးသတ်, ဒါပေမယ့်ယခင်တစ်နှစ်ရဲ့စံချိန်တင်မြင့်တက်မှဆင်းရာခိုင်နှုန်းနေဆဲ 70 ထက်ပိုခဲ့ကြသည်။ အဘူဒါဘီ Securities Exchange အပေါ်စတော့ရှယ်ယာ 14.7 ရာခိုင်နှုန်း 2009 မြင့်တက်ပေမယ့် 46 စံချိန်တင်မြင့်တက်ရာမှရာခိုင်နှုန်း 2008 ချနေဆဲဖြစ်ကြသည်။
ပင်လယ်ကွေ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့၏မြေထုထည်အနည်းငယ်မျှဖြင့်ယူအေအီးသည်ဒေသ၏စတုတ္ထမြောက်ရေနံစိမ်းတင်ပို့သူဖြစ်ပြီး၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ, အီရန်နှင့်အီရတ်။
ယူအေအီးကမ္ဘာ့သမားရိုးကျရေနံစိမ်းဆဋ္ဌမအကြီးဆုံးသက်သေသိုက်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏သတ္တမအကြီးဆုံးသက်သေသိုက်ရှိပါတယ်။ သာကမ္ဘာ့ကိုးအကြီးမားဆုံးရေနံထုတ်လုပ်သူသော်လည်း, သာရုရှားနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျသိသိသာသာပိုပြီးတင်ပို့နှင့်တကွ, ပဉ္စမအကြီးဆုံးအသားတင်ရေနံတင်ပို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ရေနံစိမ်းတင်ပို့မှုနီးကပ်စွာအားလုံးပိုကြီးသိုက်ရှိသည်သောအီရန်နှင့်ကူဝိတ်၏သူတို့ကိုချဉ်းကပ်။
2009 အတွက်ကြောင့်ရေနံစျေးကွက်တည်ငြိမ်ရန်ရေနံတင်ပို့မှုနိုင်ငံများ၏အဖွဲ့ (OPEC) ကကတိပြုစံချိန်တင်ထုတ်လုပ်မှုဖြတ်တောက်မှုနှင့်အတူစံပြလိုက်နာခြင်းငှါ, ယူအေအီးရေနံအထွက် 2.3 အတွက် 2.9 သန်းမှတစ်နေ့လျှင်အကြောင်းကို 2008 သန်းစည် (BPD) ကိုကျဆင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးအကြမ်းဖျင်း7ဘီလီယံကိုစံကုဗပေရပ်နေ၏။ ယူအေအီးရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်အစီအစဉ်များနှင့်အတူရှေ့ဆက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းများမှမှပိုမိုမြင့်မားကိုဦးစားပေးခြင်းစဉ်ကရေနံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အချိန်ကိုဘောင်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမှာထောက်ပံ့ရေးကျော် 2009 နှစ်ပေါင်းလုံလောက်သောဓါတ်ငွေ့ - အစောပိုင်း 227.1 ခုနှစ်တွင်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သက်သေပြချက်ဓာတ်ငွေ့သိုက် 130 ထရီလီယံကုဗပေမှာရပ်နေ၏။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုသူများထဲတွင်ဤဓာတ်ငွေ့သိုက်အများအပြားအကုန်အကျနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ရန်ခက်ခဲကြောင်းတစ်အမျိုးအစားများမှာပေမယ့်အမ်းမရိတ် '' ဓာတ်ငွေ့ပြတ်လပ်မှု, သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်၏မရှိခြင်း, ဒါပေမယ့်မလုံလောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုသည်။ ၎င်း၏ဓာတ်ငွေ့သိုက်၏ရာခိုင်နှုန်း 94 ထက်ဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့ရေနံသိုက်နှင့်ပိုပြီးရာခိုင်နှုန်း 90 အကြောင်းကိုပါဝင်သောကြောင့်အဘူဒါဘီ, ယူအေအီးရဲ့ခြုံငုံရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်အတွက်အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။
ဤအတောအတွင်းတစ်ချိန်ကထက်ဝက်ခန့်ကြောင်းစော်ဘွားရဲ့ဂျီဒီပီအဘို့မှတ်ထားတဲ့ဒူဘိုင်းရဲ့ရေနံထုတ်လုပ်မှု, 1991 စည်၎င်း၏ 410,000 အထွတ်အထိပ်ကနေသိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီ 2007 က 80,000 စည်ကျဆင်းသွားခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်လယ်ကွင်းထဲကနေဓာတ်ငွေ့စုပ်ဆက်လက်နေစဉ်, ဒူဘိုင်းကိုလည်းထုတ်လုပ်ထက်ပိုပြီးလောင်စာစားသုံးနှင့်ခြားနားချက်တက်အောင်တင်သွင်းမှုအပေါ် ပို. ပို. မှီခိုသည်။ အမ်းမရိတ်ပြီးသားလင်းပိုင်စွမ်းအင်, ကာတာနိုင်ငံကနေပိုက်လိုင်းအားဖြင့်ဓာတ်ငွေ့တင်သွင်းထားတဲ့အဘူဒါဘီကုမ္ပဏီထံမှဓာတ်ငွေ့တစ်နေ့လျှင်သန်းရာပေါင်းများစွာကုဗပေကိုဝယ်ယူသည်။
ယူအေအီးရဲ့ကျန်ရှိသောငါးစော်ဘွား၏လေးကိုလည်းရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု၏အသေးစားပမာဏရှိသည် ဖြစ်. , တစ်ဦးကုန်းတွင်းတူးဖော်ရေးအစီအစဉ်ကိုလမ်းအောက်မှာလောလောဆယ်တွင်ပေမယ့် Fujairah, ရေနံသို့မဟုတ်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်မထားဘူး။ သို့သော်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးတုတ်ကျင်းဆိပ်ကမ်းကိုယင်း၏ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ Fujairah ၏ဆိပ်ကမ်း, အာရေဗျပင်လယ်, အဏ္ဏဝါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလောင်စာဆီနှင့်အခြားရေနံထုတ်ကုန်များတစ်လလျှင်အကြောင်းကို 1 သန်းတန်ချိန်ကိုင်တွယ်။ ကာတာနိုင်ငံကနေလင်းပိုင်စွမ်းအင်ပိုက်လိုင်းမှတဆင့်ဓာတ်ငွေ့တင်သွင်းမှု 2008 အတွက်ရောက်ရှိသည့်စော်ဘွားအာဏာနှင့်ရေဖှံ့ဖွိုးတိုးတ facilitated နှင့်ဒေသခံစက်မှုလုပ်ငန်းနှိုးဆွပေးခဲ့သည်။
အဘူဒါဘီအစိုးရကပိုင်ဆိုင် IPIC, Fujairah အသစ်တင်ပို့မှု terminal ကို oa အဘူဒါဘီရဲ့ကုန်းတွင်းလယ်ကွင်းထဲကဆီ 150,000 စည်မှတက်မကယ်မလွှတ်မယ့်ဗျူဟာမြောက်ရေနံစိမ်း-ရေနံပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်နေသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည်ဘူဒါဘီရေနံစိမ်းတွေအတွက်ပို့ကုန်လမ်းကြောင်းဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာပင်လယ်ကွေ့ရဲ့ရေကြောင်းနင်စေအချက်ကို bypass လုပ်ထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာအစောပိုင်း 2010 အတွက်မျှော်မှန်းထားသည် Fujairah ကနေပထမဦးဆုံးရေနံတင်သင်္ဘောတင်ပို့အတူ 2011 အတွက်ပြီးစီးဘို့စီစဉ်ထားသည်။ IPIC ကိုလည်း Fujairah ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုရေနံသန့်စင်စက်ရုံကိုနှင့်သိုလှောင်ရုံဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သက်သေပြချက်ရေနံစိမ်းသိုက်နှင့်ကမ္ဘာ့ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးသဘာဝဓါတ်ငွေ့သိုက်၏စုစုပေါင်းကမ္ဘာကြီးထောက်ပံ့ရေးနီးပါး 10 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူယူအေအီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်စျေးကွက်အတွက်အရေးပါမိတ်ဖက်များနှင့်တာဝန်ရှိကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးဖို့အဓိကနေစဉ်, ရေနံတင်ပို့မှုယခုယူအေအီးနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးမျိုးစုံမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်လိုအစိုးရမူဝါဒများ၏ရလဒ်အဖြစ်, စုစုပေါင်းအသားတင်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏ခန့်သာ 30 ရာခိုင်နှုန်း။
ယူအေအီးကိုလည်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအစီအစဉ်များကို groundbreaking လိုက်ရှာနေသည်။ 2005 အတွက်ယူအေအီးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအဓိကရေနံထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာ, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းဖို့ကျိုတိုပရိုတိုကောအတည်ပြု။ အဘူဒါဘီလည်းကမ္ဘာ့စုံဆုံးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင်အစပျိုး၏တဦးတည်းကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရေနံထုတ်လုပ်မှုနှင့်သယံဇာတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိန်းချုပ်သည်။ အဘူဒါဘီယူအေအီးရေနံသယံဇာတများထက်ပို 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိထားသူ, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကို 92.2 ဘီလီယံခန့်စည်။ ဒူဘိုင်းအသီးသီးဆီ4ဘီလီယံနှင့် 1.5 သန်းစည်နှင့်အတူ Sharjah နှင့် Ras Al-Khaimah အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခန့်မှန်းခြေ 100 ဘီလီယံခန့်စည်, ပါဝင်သည်။
အဘူဒါဘီက၎င်း၏အထက်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေတူးဖော်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍသို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုဆိုတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အဘူဒါဘီနှစ်လယ်ပိုင်း 1970 ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မျောကြောင်းပြည်သူပိုင်၏လှိုင်းစဉ်အတွင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုပြည်သူပိုင်လုပ်မသာ OPEC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုသို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်မားမှအကျိုးဆက်လက်။ ယနေ့တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဂျပန်, ပြင်သစ်, ဗြိတိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ထံမှနိုင်ငံတကာရေနံကုမ္ပဏီများသည်အဘူဒါဘီရဲ့ကျယ်ပြန့်ရေနံလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် 40 နှင့် 100 ရာခိုင်နှုန်းကြား၏စုစုပေါင်းရှယ်ယာလောင်းကြေးကိုကိုင်ထားမှဆက်လက်။
ယူအေအီးကယူအေအီးအကြီးမားဆုံးဖောက်သည်အောင်, ဂျပန်ရန်၎င်း၏ရေနံစိမ်း 60 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တင်ပို့။ ဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှုယူအေအီးဂျပန်တစ်ခုလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်နီးပါးတအဋ္ဌမထောက်ပံ့အတူနီးပါးလုံးဝဂျပန်, အရည်ဓာတ်ငွေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဝယ်ရကြမည်။
ကြောင့်အကြီးအကျယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ထိခိုက်ပထဝီဖြစ်ရပ်မှန်များရန်, ယူအေအီး United States ကိုရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့အနည်းဆုံးပမာဏတင်ပို့ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ယူအေအီးအားလပ်ချိန်မှာရေနံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရေးပါသောရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်သာဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ယူအေအီးရဲ့ရန်လိုအစီအစဉ်များကိုရေနံစိမ်းစျေးနှုန်းအတွက်အနာဂတ်ဝယ်လိုအား-မောင်းနှင်တိုး offsetting မှသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါလင်းပိုင်စီမံကိန်း, ကာတာကနေယူအေအီးမှပိုက်လိုင်းအားဖြင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်သွင်းသောပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအကြားပထမဦးဆုံးအဓိကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စွမ်းအင်စာချုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းတွင်ရေနံစိမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပို့ကုန်များအတွက်အဘူဒါဘီရဲ့ဓါတ်ငွေ့ထလွတ်သွားပါမည်။ အဘူဒါဘီ၏အစိုးရကျန်ရှိနေသေးသော 24.5 ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိထားသူအနေဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံစုစုပေါင်း၏ Occidental ရေနံစီစီမံကိန်းအတွက် 51 ရာခိုင်နှုန်းကိုရှယ်ယာရှယ်ယာရှိသည်။ ကာတာသဘာဝဓာတ်ငွေ့၏ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်ပေးပို့ 2007 ၏နွေရာသီစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကာတာနိုင်ငံ၏အစိုးရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှု-sharing သဘောတူညီချက်များ၏ 30 နှစ်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ထောက်ပံ့ရေး၏လုံခြုံရေးမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းခုနှစ်, ပင်လယ်ကွေ့အစိုးရများဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းမယ်လို့ရေနံပိုက်လိုင်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလေ့လာနေကြတယ်။ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ဆီအကြောင်း Two-ပဉ္စမလက်ရှိဒီ 34-မိုင်-ကျယ်ပြန့်ပိုဒ်ကတဆင့်ရေနံတင်သင်္ဘောအားဖြင့်တင်ပို့နေသည်။
built လျှင်, ပိုက်လိုင်းများတစ်ရက်သို့မဟုတ်လက်ရှိရေလက်ကြားမှတဆင့်တင်ပို့ပမာဏကိုခန့် 6.5 ရာခိုင်နှုန်းကတစ်ဦးလျှင်ရေနံလောက်သန်း 40 အဖြစ်စည်ရွှေ့နိုင်ဘူး။ တစ်ဦးပထမဦးဆုံးသေးငယ်ပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအိုမန်ပင်လယ်ကွေ့ပေါ်တွင်ရေလက်ကြားအပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိ Fujairah ၏အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုကို, ယူအေအီးရဲ့ Habshan ရေနံကိုလယ်မှရေနံသယ်လိမ့်မယ်။
ယူအေအီးသိသိသာသာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်စျေးကွက်ထောက်ပံ့ရန်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ အချို့သော OPEC သောလူမျိုးတို့နှင့်များစွာသော Non-OPEC လူအမျိုးမျိုးကနောက်ဆုံးငါးနှစ်အတွင်းကျော်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းမှုမြင်ကြပြီနေစဉ်, ယူအေအီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 31 ရာခိုင်နှုန်းရေနံစိမ်း၎င်း၏စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကြောင်းကာလအတွင်းအဘယ်သူမျှမနှစျတှငျနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုသည်ယခင်နှစ်ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြိုလဲခဲ့သည်။
အနာဂတ်ကိုဖွင့်, ယူအေအီးအတွက်အထက်ပိုင်းရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဖွဲ့အစည်းများကလက်ရှိကျော်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးအပိုဆောင်းတိုးဖို့စောဒနာလို 2020 အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်နီးပါး 40 သန်းစည်မှနိုင်ငံ၏ရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရည်ရွယ်ပြီးအသစ်သောစီမံကိန်းများ, ဖော်ထုတ်ရန်ဆက်လက် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်။
ယူအေအီးကိုဖြတ်ပြီးလန်းစပြုပြီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုလျှပ်စစ်မီးများအတွက်ဝယ်လိုအားကြီးမားတိုးမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ လက်ရှိခန့်မှန်းပါဝါများအတွက်ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားထက်ပို 2020 အားဖြင့်နှစ်ဆလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့စျေးကွက်မှယူဆောင်နိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လိုအစာရှောင်ခြင်းအစဉ်အလာစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များအပေါ်ကန့်သတ်မှုအဖြစ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူ, ယူအေအီးအစိုးရသည်၎င်း၏လောင်စာဖို့လိုအပျတနျခိုးထုတ်လုပ်ဘို့အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းဖော်ထုတ်ရည်ရွယ်အမျိုးမျိုးသောအစပျိုးစတင်ပေးခဲ့ပါတယ် စီးပွားရေးမှာ။
ယူအေအီးငြိမ်းချမ်းသောနျူကလီးယားစွမ်းအင်အစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကဲဖြတ်သည်။ ယူအေအီးအစိုးရနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများပင်ရိုးရှင်းသောအကဲဖြတ်၏ဖြန့်ကျက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ထိခိုက်လွယ်၏ acute သတိထားမိသည်။ ထို့ကြောင့်ယူအေအီးအစိုးရငြိမ်းချမ်းသောနျူကလီးယားစွမ်းအင်အစီအစဉ်က၎င်း၏လက်ရှိအကဲဖြတ်အဖြစ်က၎င်း၏အလားအလာအနာဂတ်ဖြန့်ကျက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်း၏ငြိမ်းချမ်းသောနှင့်တည်ပြီးသတ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ အစိုးရကနျူကလီးယားစွမ်းအင်၏အလားအလာဖှံ့ဖွိုးတိုးတလုံလုံခြုံခြုံနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ, လုံခြုံစိတ်ချစွာလိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုဖြေရှင်း, အများပြည်သူအနေနဲ့ In-depth မူဝါဒကစက္ကူထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လင်းမြင်သာမှု, Non-ပြန့်ပွား, လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံမှု၎င်း၏ကတိကဝတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ယူအေအီးကယူရေနီယံသန့်စင်ကိုလိုက်နဲ့အစားနျူကလီးယားလောင်စာများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်အပေါ်မှီခိုအားထားမည်မဟုတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်သိရသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးယူအေအီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (အိုင်အေအီးအေ) နှင့်အခြားအစိုးရများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
ဒူဘိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်စဉ်တိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအောင်မြင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်တဲ့မာစတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အလိုတော်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးမြှင့်အဖြစ်လျှပ်စစ်မီးဝယ်လိုအား-side-စီမံခန့်ခွဲမှု, တစ်ကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။
ယူအေအီးအကြီးမားဆုံးအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စု, အဘူဒါဘီ, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အစီအစဉ်များအတွက်ထက်ပိုမို $ 15 ဘီလီယံအထိကျူးလွန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Masdar Initiative ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယူအေအီးစီးပွားရေးအမျိုးမျိုးမှအမွှာကတိကဝတ်အလေးပေး။ အဆိုပါ Masdar Initiative မှပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်, စွမ်းအင်ထိရောက်မှု, ကာဗွန်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ငွေရှာခြင်းအတွက်, ရေအသုံးပြုမှုနှင့် desalination အတွက်နည်းပညာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စီးပွားရေးအပေါ်အာရုံစိုက်။
ကို BP, Shell, Occidental ရေနံ, စုစုပေါင်းရှာဖွေရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ရေး, General Electric, မစ်ဆူဘီရှီ, Mitsui, Rolls Royce, Imperial College London မှ, MIT နဲ့ WWF: အဆိုပါ Initiative ရဲ့မိတ်ဖက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများနှင့်အထက်တန်းလွှာအဖွဲ့အစည်းများအချို့ပါဝင်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စွမ်းအင်နည်းပညာများ၏သရုပ်ပြ, စီးပွားဖြစ်နှင့်ကလေးမွေးစားခြင်းကိုထောကျပံ့ဖို့တစ်ခုကတီထွင်ဆန်းသစ်မှုစင်တာ: ဒါဟာလေး key ကိုဒြပ်စင်ရှိပါတယ်။ Masdar စီးတီး, ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး Carbon-ကြားနေ, စွန့်ပစ်အခမဲ့, မော်တော်ကား-အခမဲ့မွို့၌တည်ရှိသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့အတွက်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များနှင့်အတူသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏ Masdar Institute မှ။ ကျိုတိုပရိုတိုကောများကထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်တစ်ဦးကဖှံ့ဖွိုးတိုးကုမ္ပဏီထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနှင့်သန့်ရှင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီယန္တရားဖြေရှင်းချက်များ၏စီးပွားဖြစ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ တစ်ဦးကအထူးစီးပွားရေးဇုန်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နည်းပညာများနှင့်ထုတ်ကုန်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဖွဲ့အစည်းများအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်။
ယူအေအီးရှည်လျားစွမ်းအင်၏အရေးပါသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခဲ့ပြီးယခုအဖြစ်ကောင်းစွာစွမ်းအင်တစ်ခုတိုးသက်ဆိုင်ရာစားသုံးသူဖြစ်လာနေသည်။ အပိုဆောင်းဟိုက်ဒရိုကာဘွန်သိုက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်၎င်း၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အထောက်အကူပြုရန်၎င်း၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်, ယူအေအီးတာဝန်ရှိစွမ်းအင်သာသနာတော်ကို၎င်း၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာကိုဆက်လက်မျှော်လင့်ပါသည်။
ယူအေအီး၏ပတ်ဝန်းကျင်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကယနေ့အထိရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အများဆုံးရှုပ်ထွေးအလုပ်များကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အနိမ့်မိုးရေချိန်ရှင်သန်ရန်တိရစ္ဆာန်များနှင့်အပင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အထူးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်လိုအပ်, ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများဖန်တီးပါ။ တောင်မှအသေးစားရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကိုယူအေအီးရဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအပေါ်တစ်ဦးပြင်းထန်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအနိမ့်သောသဘောကိုမုသာကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အတွက်ပင်သေးငယ်တဲ့မြင့်တက်နိုင်ငံ၏မြို့သားလွှမ်းမိုးသောအများစုနေထိုင်ပြီးဘယ်မှာစီစဉ်ထားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများကြီးရာအရပျကိုယူပြီးသည်အဘယ်မှာရှိကမ်းရိုးတန်းဇုံအတွက်လေးနက်သောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများပင်လယ်ကွေ့တွင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပြီးသားမြင့်တက်စေခြင်းငှါအရိပ်လက္ခဏာဖော်ထုတ်မယ်နေကြသည်။
အဆိုပါလူဦးရေတစ်ဝှမ်းငါးသန်းယနေ့ 180,000 အတွက် 1968 န်းကျင်ကနေစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ်, လူနေအိမ်စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိပွညျသူပွညျသားပမာဏကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဖှံ့ဖွိုးတိုးတယူအေအီး reshaped ပါပြီ အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်ဘောင်အတွင်းကမ်းရိုးတန်း။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပိတ်သောကျောက် quarrying အဆိုပါ Hajar တောင်တန်းတာအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်စဉ်လေဆိပ်, ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ပုံစံအတွက်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများ၏ extension, ယခင်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘာတခုတခုအပေါ်မှာနောက်ထပ်သေဆုံးသူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
အများဆုံးတက်ကြွစွာယူအေအီးရဲ့မြေဧရိယာ၏နီးပါးလေးပဉ္စမများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အေဂျင်စီကအဘူဒါဘီ, အရာ၏ - - ဒေသခံအေဂျင်စီများနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရေဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနနှင့်ပြင်ဆင်မှု၏တက်ကြွသောအစီအစဉ်များအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက် အစဉ်အမြဲ-စည်းမျဉ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအကောင်အထည်ဖော်ရေး။
ပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်စွမ်းအင်နှင့်ရေစားသုံးမှုကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်း၏အများပြည်သူအသိပညာပေးတို့အားဤသို့သောအမ်းမရိတ်တောရိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း (EWS) အဖြစ် Non-အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏အကူအညီဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
Yasat ရိန်းက၎င်း၏မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိ dugongs အတူဧရိယာ Protected အများအပြားပိုပြီးကျွန်းများပါဝင်သည်မှကျယ်စေခြင်းနှင့်ယခုနီးပါး 3000 စတုရန်းကီလိုမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ EWS နှင့် Fujairah မြူနီစီပယ်ကိုလည်း Wadi Wurrayah တစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အရံကြေညာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိအာရေဗျ tahr မှနေအိမ်, ဒီယူအေအီးရဲ့ပထမဦးဆုံးသောတောင်ပေါ်ရံ။
ကြောကျကငျြးနှင့်ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ခြင်းကျောက်မှစွပ်စွဲလေထုညစ်ညမ်းမှု Ra ရဲ့ Al-Khaimah နှင့် Fujairah အတွက်သေချာသောတည်ထောင်ခြင်း၏ပိတ်သိမ်းဖို့ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်စဉ်လတ်ဆတ်တဲ့ရေနှင့်အဏ္ဏဝါအရင်းအမြစ်များထိန်းသိမ်းရေး, ယူအေအီးအစီအစဉ်အပေါ်လည်းမြင့်မားသည်။
ထို့အပြင်ဖယ်ဒရေးရှင်းသည်ဗဟိုအာရှဒေသများ၌မျိုးပွားပြီးအာရေဗျပင်လယ်ကွေ့သို့ရွှေ့ပြောင်းသွားသောဟူဘာရာစပါးကျီကဲ့သို့သောမျိုးစိတ်များကိုကာကွယ်ရန်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါယူအေအီးသည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သောငှက်မျိုးစိတ်များကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်အသစ်အတွက်ဌာနချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ဥရောပ, အာဖရိကနှင့်အာရှ။
ယူအေအီးနိုင်ငံတကာမီဒီယာကုမ္ပဏီများအတွက်ဒေသတွင်းအချက်အချာအဖြစ်နှင့်ပြည်တွင်းမီဒီယာများစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ပြောသောလယ်ပြင်အဖြစ်အမှုဆောင်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းရဲ့မီဒီယာကဏ္ဍ၏စီးပွားဖြစ်နှလုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာကဏ္ဍ WAM, မီဒီယာဥပဒေများပြဋ္ဌာန်း, မီဒီယာလိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သည့်အမျိုးသားမီဒီယာကောင်စီကကြီးကြပ်လျက်, ပြင်ပသတင်းအချက်အလက်ဌာန running နှင့်စော်ဘွားသတင်းအေဂျင်စီသည်။
နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမီဒီယာလုပ်ငန်းစုကြီးများတစ်ခုမှာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတစ်အကွာအဝေးပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်သောအဘူဒါဘီမီဒီယာကုမ္ပဏီ, ရေဒီယို station ၏ကွန်ယက်, စာပေနံပါတ် (အယ်လ် Ittihad သတင်းစာ, အမျိုးသားသတင်းစာ, Zahrat အယ်လ် Khaleej မဂ္ဂဇင်းနှင့် Majid မဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပါသည် ) နှင့်ရုပ်ရှင်-ဖှံ့ဖွိုးတိုးကုမ္ပဏီ Imagenation ယူနိုက်တက်ပုံနှိပ်စာနယ်ဇင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အပါအဝင်အခြားမီဒီယာ-related စီးပွားရေး, ။
အခမဲ့ဇုန်မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တူရိယာဖြစ်ရပြီ, CNN ကများစွာသောအခြားမီဒီယာပညာရှင်များဆွဲဆောင်တော်မူကြောင်းကိုအဘူဒါဘီရဲ့အသစ် twofour54 မီဒီယာဇုန်အတွက်သတင်းအချက်အချာထူထောင်ခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းမီဒီယာစီးတီးယခု 1200 ထိုကဲ့သို့သောက CNN, BBC သတင်းဌာန, MBC နဲ့ CNBC အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထက်ပိုမိုရှိပါတယ်။ ဤသည်ဒူဘိုင်းတွင်အင်တာနက်စီးတီး, ဒူဘိုင်းစတူဒီယိုစီးတီးနှင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုဇုန်အပါအဝင် Tecom အားဖြင့် run မီဒီယာအခမဲ့ဇုန်၏စပျစ်သီးပြွတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဇုန်ထိုကဲ့သို့သော Fujairah ကို Creative City နှင့် Rak မီဒီယာစီးတီးအဖြစ်သေးငယ်မီဒီယာအခမဲ့ဇုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကပြည့်စုံပြီ။
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု, နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိပေါ်နှင့်ပြည်တွင်း၌က The စက်ဝိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီရုပ်ရှင်ပွဲတော်, အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့ဒူဘိုင်းစတူဒီယိုစီးတီး, twofour54 အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းအတော်များများ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အမွေအနှစ်များအတွက်အဘူဒါဘီအာဏာပိုင် (ADACH) ကထောက်ခံသည်ကိုနှစ်ဦးစလုံး ကော်မရှင်။
Arabic သို့အဓိကအကျင့်ကိုကျင့်၏ဘာသာအပါအဝင်စာအုပ်များ, နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Kitab နှင့် Kalima အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများကရာထူးတိုး။ အကြီးဆုံးစာပေဆု 2009 အတွက် Pedro Martinez Montavez ထံသို့ ဝင်. ဖြစ်သောရှိတ် Zayed စာအုပ်ဆုချီးမြှင့်သည်အနေဖြင့်ယူအေအီးတှငျကငျြးပခဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဗိုလ်မှူးဝိုင်း, အရှည်လျား-ထူထောင် Sharjah နိုင်ငံတကာစာအုပ်တရားမျှတသောနှင့်အဘူဒါဘီနိုင်ငံတကာစာအုပ်တရားမျှတသောပါဝင်သည်။
အမွေအနှစ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးသားရေးလက္ခဏာမှဗဟိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ယူအေအီးက၎င်း၏ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်းအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္ဘာ့အဆင့်မီသယံဇာတရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အလေးပေးနှင့်အရှေ့နှင့်အနောက်အကြားတံတား၏ Forge နှင့်အတူတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုခေတ်ဆန်းလျှက်ရှိသည်။
ယဉ်ကျေးမှု၏ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, လူငယ်နှင့်ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအသိပညာတှေလည်းလမ်းညွှန်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အဟောင်းများကိုနိုင်ငံသားများအားပေးအားမြှောက်နေစဉ်, ယဉ်ကျေးမှု, ဉာဏ, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူငယ်ရွယ်စော်ဘွားများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးသောဤနယ်ပယ်များတွင်တက်ကြွစွာဖြစ်ပါသည် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ။
မွေးစားဂီတလေးမွတျကိုကူညီနိုင်ရန်, ADACH 2009 အတွက်နယူးယော့ခ်တီးဝိုင်းများ၏အရှေ့အလယ်ပိုင်းပွဲဦးထွက်တည်ခင်းဧည်သောအဘူဒါဘီဂန္တဝင်အပါအဝင်အများအပြားဂီတဖြစ်ရပ်များ, စုစည်း။ WOMAD ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂီတပွဲတော်လည်းအဘူဒါဘီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, '' Dubia အသံစီးတီး '' ခေါင်းစဉ်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုစီးရီး 2009 အတွက်ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယင်းအမြင်အာရုံအနုပညာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စောစော 2009 အတွက် '' အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှ Expression '' ပြပွဲဝါရင့်ပန်းချီဆရာများအနေဖြင့်ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးမျိုးဆက်သစ်မှရှစ်ဆယ်ခုနစ်ဒေသခံအနုပညာရှင်တွေ, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ, ဗွီဒီယိုနဲ့ installation ကိုအနုပညာရှင်တွေ featured ။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါ Sharjah နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်, အနုပညာဒူဘိုင်း, အနုပညာပြပွဲနှင့်အခြားပြပွဲ၏နံပါတ်ထိုကဲ့သို့သော Guggenheim ဖောင်ဒေးရှင်းက, အ Louvre နယူးယောက်တက္ကသိုလ်အဘူဒါဘီနှင့်ပဲရစ်-Sorbone တက္ကသိုလ်အဘူဒါဘီအဖြစ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာကိုလည်းကောင်းစွာစော်ဘွားတစ်လျှောက်လုံးဆက်ကပ်အပ်နှံပြခန်းမှာကိုယ်စားပြုနေသည်။
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနတို့ကအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုအစပျိုးအနက်ယခုနှစ်ကာလအတွင်းလူငယ်နှင့်ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဗင်းနစ် Biennale မှာယူအေအီးရဲ့ပထမဦးဆုံးတဲ၏အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အခွားသောလှုပ်ရှားမှုများပင်လယ်ရပ်ခြားတစ်ပါတ်ကြာ '' ယူအေအီးယဉ်ကျေးမှုနေ့ရက်များ '' ဘာလင်ပွဲတော်နှင့်အခြားန်ကြီးဌာနပဏာမခြေလှမ်း, စီမံကိန်း '' Cultures ၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး '' ကိုလည်းစတင်ရာ Huamburg အတွက်တစ်ဦးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှ-ဂျာမန်အနုပညာပြပွဲပါဝင်သည်။
ကျယ်ပြန့်ယဉ်ကျေးမှုမျက်နှာစာတွင်, ထိုကဲ့သို့သော Guggenheim အဘူဒါဘီ, Louvre အဘူဒါဘီ, နှင့်ရှိတ် Zayed အမျိုးသားပြတိုက်အဖြစ်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပြတိုက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတနှစ်အောက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါပြီးသားကောင်းမွန်စွာထူထောင် Sharjah ပြတိုက်ဦးစီးဌာနမှအစ္စလာမ်မစ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအံ့မခန်းအသစ်ကပြတိုက်အပါအဝင်ဆယ်ခုနစ်ပြတိုက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ, ကြီးကြပ်။
၏အဆင့်မြှင့်တင်ရန်တစ် ဦး အလိုဆန္ဒ လူနေမှု ပြည်သူလူထုနှင့်ပြည်သူလူထု၏သာယာဝပြောမှုတို့သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသာမကလူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်မူဝါဒများစွာကိုမောင်းနှင်လျက်ရှိသည်။ တိုတောင်းသောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူအများစုနေထိုင်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်ကြီးမားသောလူမှုရေးအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဤကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကြားမှယူအေအီးသည်လုံခြုံမှုရှိပြီးတည်ငြိမ်။ ပွင့်လင်းပြီးတိုးတက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သည်းခံမှု၊ လူသားချင်းစာနာမှုနှင့်ထောက်ထားစာနာမှုတို့ကြောင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကူညီပေးဖို့အစိုးရအားထုတ်မှုဟာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗလီတစ်လျှောက်လုံးသောကြာနေ့ပဌနာမှာတရားဒေသနာဘာသာတရား၏လူမှုရေးနှင့်ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍအပေါ်နှင့်မယ့်ဘာသာရေးတရားသေအယူဝါဒအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရမယ်ကြောင်း, တစ်ဦးမူဝါဒကကျားကန် 2009 အတွက်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ခေါင်းစဉ်များတိုင်းပြည်နှင့်သည်းခံစိတ်၏ lve, ကလေးများ, အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့်အလုပ်၏အရေးပါမှုကိုဆောင်ခဲ့ဖို့ဘယ်လိုပါဝင်သည်။
အစိုးရလူမှုရေးမူဝါဒကသုခချမ်းသာတဲ့ကျယ်ပြန့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှဂျီဒီပီထက်ကျော်လွန်ကြည့်သောကုလသမဂ္ဂလူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်း (HDI), အတွက်အဆင့်များကသက်သေအတိုင်း, ထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ 1980 နှင့် 2007 အကြား, ယူအေအီး HDI နှစ်စဉ်ရာခိုင်နှုန်း 0.72 မြင့်တက်နှင့်တက် 0.903 ကနေ 0.743 ယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ data ရရှိနိုင်ပါသည်ရာများအတွက် 182 နိုင်ငံတွေထဲကအဖွဲ့ချုပ်မှသုံးဆယ်-ပဉ္စမတတ်၏ - တဲ့အလွန်မြင့်မားသောလူ့-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတရမှတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတွေစာရင်းထဲရှိယူအေအီးရာအရပ်လုံခြုံရေး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုအသင်းချုပ်ရဲ့လျင်မြန်စွာလူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်းလူဦးရေဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ 2009 ၏အဆုံးမှာယူအေအီး၏လူဦးရေထ 50.6 အတွက် 4.76 သန်း, ဒါမှမဟုတ်ရာခိုင်နှုန်း 2008 န်းကျင်၏နှစ်စဉ်တိုးတက်နှုန်းကနေ 6.3 သန်းဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့သည်; ဒေသခံလူဦးရေရဲ့ကြီးထွားမှုနှုန်း 3.4 ရာခိုင်နှုန်း 2009 မှာခန့်မှန်းခဲ့သည်။ သို့သော်ဤလျင်မြန်စွာတိုးနေသော်လည်း, ယူအေအီး 195,000 ရဲ့အစမှာ Dh53,133.5 (အမေရိကန် $ 2009) မှာခန့်မှန်းခဲ့သည့်ဦးချင်းဝင်ငွေနှုန်း GDP ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အချမ်းသာဆုံးလူမျိုးတို့၏တအဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားပြီ အာရပ်ကမ္ဘာ၌သာကာတာနိုင်ငံမှဒုတိယ။
မိသားစုအစဉ်အမြဲယူအေအီးလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမိသားစုဝင်များပင်အများဆုံးကျူးလွန်စိန်ခေါ်နိုင်ပြီး, အစိုးရ, လိုအပ်နေသူတို့အားထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ, မသန်စွမ်းသူနှင့်ကွာရှင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အစိုးရမဟုတ်သောနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်ကြသည်။ ယူအေအီးလခြမ်းနီအာဏာပိုင်, အထူးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလူမှုရေး, စီးပွားရေး, ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, နိုင်ငံတွင်းရှိအကြီးဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အကူအညီကိုလည်းအထွေထွေအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကို run လူမှုရေးစင်တာများကကမ်းလှမ်းသည်။
အစိုးရကိုလည်းဒေသခံအိုးအိမ်လိုအပ်ချက်များကိုဦးစားပေးပေးခြင်းနှင့်လိုအပ်တဲ့အဆောက်အဦရှိသည်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှများအတွက်နီးပါး 17,000 သစ်ကို Villas လာမည့်နှစ်ဆယ်ကျော်လာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာအဘူဒါဘီ built-in များနှင့် 50,000 လိမ့်မည်။ အများစုမှာအိမ်များနှင့်မြေကွက်တာဝန်ခံအခမဲ့နိုင်ငံသားများမှပေးလိမ့်မည်။ ယူအေအီး citizines များအတွက်အိမ်ရာထောက်ပံ့ငွေနှင့်ချေးငွေများပေးအစိုးရကငွေကြေးထောက်ပံ့အဆိုပါရှိတ် Zayed အိမ်ရာအစီအစဉ်, ကိုလည်းစော်ဘွားတစ်လျှောက်လုံးက၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်။
ယူအေအီးအဆိုပါအသင်းချုပ်၌ရှိသောလူတစ်ဦးချင်းစီ Resident ၏သမာဓိလေးစားပါသည်။ အားလုံးနိုင်ငံသားများအဘို့အတန်းတူရေးနှင့်လူမှုရေးတရားမျှတမှုကိုအာမခံဖို့ကတိကဝတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာခံပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း, မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တားမြစ်အပေါင်းတို့, နိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးအလေးထားဖေါ်ပြနှင့်မိန့်ခွန်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပါအဝင်လူထုအခြေပြုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလေးစား, ငြိမ်းချမ်းသော
ပရိသတျမြားနှငျ့အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်၏အလေ့အကျင့်။ အစိုးရတစ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အခိုင်အမာသန္နိဋ္ဌာန်လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို၏အခြေခံမူများနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုတက်ရက်စွဲဆောင်ကြဉ်းနေဖြင့်၎င်း၏ပြည်တွင်းစံချိန်တိုးတက်လာဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အညီအမျှနဲ့သည်းခံစိတ်, ယူအေအီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့်တရားမျှတမှုချက်တွေထားတဲ့ဘာသာရေးတန်ဖိုးများနှင့်အတူအညီဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာ, အအဖွဲ့ချုပ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆန့်ကျင်အမျိုးသမီး, ကလေးအခငြ့်အရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်း, နိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်အပေါ်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ILO ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်မသန်စွမ်းတွေနဲ့ပြည်သူ့အခွင့်အရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်း၏ပပျောက်ရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်း၏တစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာအဖွဲ့ချုပ်မှခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆန့်ကျင်အမျိုးသမီး, ကလေးအခငြ့်အရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်း, နိမ့်ဆုံးအသက်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ညီလာခံနှင့်မသန်မစွမ်းနှင့်အတူပြည်သူ့အခွင့်အရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်း၏ပပျောက်ရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်း၏တစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
အဖြစ်ဝေးအလုပ်သမားပြဿနာများကိုသက်ဆိုင်ရာကြသည်အတိုင်း, ယူအေအီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အကောင်းဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအလေ့အကျင့်တွေနဲ့အညီအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုအချိန်ပေါ်လုပ်အားခ၏ငွေပေးချေမှုကိုအာမခံရန်နှင့်လူနေမှုနှင့်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်, အလုပျသမားမြား၏ဘေးကင်းမှုသေချာစေရန်အဖြစ်ချိုးဖောက်မှုများ minimize နိုင်ရန်အတွက်ဥပဒေများကိုတင်းကြပ်ဘက်တော်သားသေချာစေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ကျားမတန်းတူရေးအတွက်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကတည်းကအစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်တန်းတူမိတ်ဖက်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သကဲ့သို့ယူအေအီးများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ရှည်လျားအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ အစိုးရ, ယဉ်ကျေးမှု, လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်များတွင်အမျိုးသမီးများကိုအားပေးတဲ့နည်းဗျူဟာကိုလိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး-အဆင့်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့တွင်ပြုလုပ်တတ်၏တဲ့ပုံ - ရလဒ်အဖြစ်ယူအေအီးဟာ 2009 ကုလသမဂ္ဂလူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီရင်ခံစာကျား-related ဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်းများတွင်သုံးဆယျ့အဋ္ဌမအရပျ၌ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူအေအီးအမျိုးသမီးတွေယနေ့အလုပ်အမှုဆောင်အပါအဝင်အစိုးရအပေါငျးတို့သအဖွဲ့အစည်းများ, ဥပဒေပြုရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးအကိုင်းအခက်များတွင်ပါဝင်ရန်နှင့်အလုပ်အကိုင်များကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးပျော်မွေ့။ တကယ်တော့, ယူအေအီးအမျိုးသမီးများကိုယခုအကြီးတန်းရေးသားချက်များ၌ရှိကြ၏ရာခိုင်နှုန်း 66 ဘယ်သူကို၏, အများပြည်သူကဏ္ဍလုပ်သားအင်အား၏ရာခိုင်နှုန်း 30 ပါဝင်သည်။
အားလုံးယူအေအီးနိုင်ငံသားများ, မူလတန်းအလယ်တန်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုအခမဲ့တစ်လောကလုံး access ကိုပျော်မွေ့။ ၎င်း၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောဖှံ့ဖွိုးတိုးတရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုနှင့်အဓိကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ဆင်နှင့်ကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များစနစ်တကျအကဲဖြတ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးလုပ်လျက်ရှိသည်: မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ပညာရေးကဏ္ဍသစ်တစ်ခုအရေးပါမှုအပေါ်ယူထားပါတယ် နှင့်အသိအမှတ်ပြု။
အထူးပညာရေးပုံမှန်အစည်းအဝေးအများပြည်သူကျောင်းများသို့အထူး-လိုအပ်ချက်များကိုစင်တာများအမျိုးမျိုးကနေအမျိုးသားရေးကြောငျးသားမြား၏ပေါင်းစည်းမှုအပေါ် 2009 အတွက်အာရုံနှင့်အတူအသစ်တဖန်အာရုံစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများ၏တစ်ဦးကအသစ်တစ်စုံကျောင်းများတွင်ဤမူဝါဒနှင့်အတူလိုက်လျောသေချာမှာရည်ရွယ်ထားနှင့်ပြစ်ဒဏ်များအထူးလိုအပ်ချက်နှင့်အတူသားသမီးများ၏ Non-လက်ခံမှုများအတွက်မြှုတ်လိမ့်မည်။
ယူအေအီးအတွက်တက္ကသိုလ်အဆင့်ပညာရေးကိုလည်းလျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုလျှက်ရှိသည်။ အသစ် Zayed တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းဟာထွန်းသစ်စ Capital ကိုခရိုင်အတွင်းရှိ 75 ဟက်တာပေါ်တွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ အယ်လ် Ain အတွက်ယူအေအီးတက္ကသိုလ်မှာလည်းသိသိသာသာတိုးချဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်, အသစ်တစ်ခုကျောင်းဝင်းဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအဓိကတတိယအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများနည်းပညာ၏အဆင့်မြင့်ကောလိပ်များသည် Etihad လေ့ကျင့်ရေးစင်တာ, လေကြောင်းနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးများအတွက်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းကောလိပ်, ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးများအတွက်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအင်စတီကျုနှင့် Etisalat ရဲ့ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များပါဝင်သည်။
ပဲရစ် Sorbonne ကနေမီချီဂန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များ, အလွန်ကောင်းစွာယူအေအီးအတွက်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ နယူးယောက်တက္ကသိုလ်၏အဘူဒါဘီကျောင်းဝင်း 2010 ၏ဆောင်းဦးရာသီများတွင်ဖွင့်လှစ်။ အထူးပြုသင်တန်းများတစ်ခုအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အခြားအရေးကြီးအဖွဲ့အစည်းများ INSEAD, နယူးယောက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အကယ်ဒမီ, အစိုးရ၏ဒူဘိုင်းကျောင်း, အဆိုပါရေနံအင်စတီကျုနှင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏ Masdar Institute မှပါဝင်သည်။
ယူအေအီးအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်လောကလုံးနှင့် Pre-post-Natal စောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ကမ္ဘာ့အများဆုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနဲ့တန်းတူဖြစ်တယ်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, 78.5 နှစ်ပေါင်းမွေးဖွားမှာသက်တမ်းဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကသူတို့အားအလားတူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ပြည်တော်ပြန်နှင့်၎င်းတို့၏မှီခိုသူအဘို့အဘူဒါဘီအတွက်မဖြစ်မနေကျန်းမာရေးအာမခံများ၏နိဒါန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အဓိကကားမောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖက်ဒရယ်ပဏာမတိုင်းပြည်အတွင်းရှိသမျှသောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှနှင့်ပြည်ပရှိတစ်ဦးစုစည်းမဖြစ်မနေအစီအစဉ်အောက်တွင်မသင်မနေရကျန်းမာရေးအာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘဏ္ဍာရေးရာသီဥတုရှိနေသော်လည်း, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု 2009 အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိအစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကစီမံကိန်းများနံပါတ်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အာရုံစူးစိုက်တည်ယူအေအီးအတွက်မြင့်မားသောစံ၏ပြီးသားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ။
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးဝါးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးယူအေအီးရဲ့အတော်လေးငယ်ရွယ်လူဦးရေရဲ့ရေရှည်သုခချမ်းသာဖို့အရေးပါစဉ်းစားနေကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကကြွလာနှစ်များတွင်အများအပြားလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရောဂါများအတွက်မြင့်တက်။ ယဉ်ကျေးမှုအတားအဆီးတွေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်လျက်ရှိသည်သော်လည်း, သူတို့သည်နေဆဲထိုကဲ့သို့သောကင်ဆာအဖြစ်အလေးအနက်ကိစ္စများအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ လေးဆယ်ခြောက်ဆယ်၏အသက်အရွယ်နှင့်အများပြည်သူသောနေရာများအတွက်ဖက်ဒရယ်ဆေးလိပ်သောက်ပိတ်ပင်မှုကြားကမိန်းမတို့အဘို့မသင်မနေရ mammograms ဤကိစ်စတှငျပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရန်လုပ်ခံရကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ဥပမာများဖြစ်ကြသည်။ ယူအေအီးလည်းဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကအရမ်းနှုန်းထားများရှိပါတယ်, ဤပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်မဟာဗျူဟာများကိုထုတ်လှိမ့်သည်။ မူလတန်းကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒအခြားအရေးပါသည့် tool ကိုဖြစ်ပြီး, ယူအေအီးချောမွေ့တိုးတက်လာဖို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။
2009 အတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များတစ်က်တုပ်ကွေး (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ၏ခြိမ်းခြောက်မှုအားဖြင့်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သုံးသည့်အဓိကကျန်းမာရေးအလောင်းတွေ - ကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာန, ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင် - အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းကနျြးမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ - အကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး, ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးဝါးမှလျှင်မြန်စွာထိရောက်စွာ switched နှင့်ထိရောက်သောအစီအစဉ်ကိုအခြေအနေကစီမံခန့်ခွဲဖို့ရာအရပျ၌ထားခဲ့ပါတယ် ။
ယူအေအီးမှာပြည့်စုံသော, အစိုးရ-ရန်ပုံငွေကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်လူဦးရေမှကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏မြင့်မားသောစံကယ်တင်မယ့်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်ရှိနေသည်။ ယူအေအီးများစွာသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးအပ်ခြင်းသိသိသာသာအသွင်ပြောင်းလျှက်ရှိသည်။
အသစ်ကဖွား (မွေးကင်းစကလေး) သေဆုံးမှုနှုန်း: Pre-Natal နဲ့ post-Natal စောင့်ရှောက်မှုကမ္ဘာ့အများဆုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့်တန်းတူပေါ်မှာနေစဉ်ယူအေအီးအတွက်တစ်ချိန်ကအစုလိုက်ခဲ့ငှက်ဖျား, ဝက်သက်နှင့် poliomyelitis ကဲ့သို့ကူးစက်ရောဂါအများစုဟာ, အမြစ်ပြတ်ပြီ 5.54 နှုန်း 1000 မှ 7.7 နှင့်မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးမှုနှုန်း 1000 လျှော့ချခဲ့သည်။ မိခင်သေဆုံးမှုနှုန်းတိုင်း 0.01 များအတွက် 100,000 ကျဆင်းသွားပါပြီ။
ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်, ယူအေအီးအတွက်မွေးဖွားမှာသက်တမ်းအပေါငျးတို့သအဆင့်မှာစောင့်ရှောက်မှု၏ဤမွငျ့မားစံ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်, 78.3 နှစ်ပေါင်းမှာ, ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကသူတို့အားအလားတူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ နေ့စွဲရန်, ယူအေအီးအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကနဲ့ကြီးမားတဲ့အစိုးရကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခြားကဏ္ဍများနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဒီအလေးပေးဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ပါတယ်နှင့်အများပြည်သူ-ပုဂ္ဂလိကမိတ်ဖက် သာ. အရေးကြီးသောဖြစ်လာရသည်။
ပြည်သူ့မူဝါဒကပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်, အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အပေါ်အခြေခံပြီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဥပဒေရေးရာမူဘောင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရုံစိုက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပြည်သူ့မူဝါဒကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍအတွင်းကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကဦးစားပေးသတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်။
လူနာ (နိုင်ငံသားများနှင့်ပြည်တော်ပြန်), ပေးသူနှင့်စီစဉ်န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးအာမခံခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးစနစ်ငွေကြေးများအတွက်တာဝန်ရှိသူတို့အား: ဘူဒါဘီအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးအပ်ခြင်းကာယကံရှင်များ၏တစ်ခုလုံးကို spectrum ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုသိသိသာသာအကူးအပြောင်းလျှက်ရှိသည်။ အဘူဒါဘီအတွက်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဘို့အ Key ကိုရည်ရွယ်ချက်များမှနေသောခေါင်းစဉ်:
အလုံးစုံတို့အဘို့ကိုတိကျခိုင်မာစွာဝန်ဆောင်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ၏လျှောက်လွှာများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပစ်မှတ်မှတဆင့်ရာထူးတိုးခံရဖို့, စောင့်ရှောက်မှု၏အရည်အသွေး, အမြဲတမ်းမူလတန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတိုးတက်စေပါ။
အားလုံးနေထိုင်သူများအရှင်အခမဲ့-စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှတဆင့်ထူးချွန်မြှင့်တင်ရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများရွေးချယ်ဖို့ပါဝါနှင့်အတူစောင့်ရှောက်မှု၏တူညီသောစံမှ access ပေးခြင်း, ဝန်ဆောင်မှုများမှဝင်ရောက်ခွင့် Expand ။
အသစ်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမှကန့်သတ်အစိုးရ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတူအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပုဂ္ဂလိကပံ့ပိုးပေးရန်အများပြည်သူထံမှ Shift သို့မှသာပုဂ္ဂလိကပေးသူထက်အစိုးရ, ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ရာများ။
ပြည်တွင်းအပါအဝင်အားလုံးအလုပ်သမားများ, အဘို့မသင်မနေရအာမခံ, စပွန်ဆာများကငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍန်ထမ်းများအတွက်မသင်မနေရကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကို, အဘူဒါဘီအတွက်အကောင်အထည်ဖော်အဖြစ်, 2008 အတွက်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းသက်ရောက်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ အသစ်ကစနစ်၏ထူးခြားချက်တခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပွင့်လင်းငွေကြေးပြန်လည်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးနေထိုင်သူများအဘို့အတတ်နိုင် access ကိုနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရန်ပုံငွေပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကကုသိုလ်ဖြစ်ရန်ပုံငွေ underinsured ပြည်တော်ပြန်များအတွက်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောကင်ဆာ, Dialysis, polytrauma နှင့်မသန်စွမ်းမှုအဖြစ်ကိုပိုမိုလေးနက်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ယူအေအီးသည်ကွန်ဖရင့်များ၊ ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာပြပွဲများနှင့်မြင်းပြိုင်ပွဲအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလား၊ အဘူဒါဘီဖော်မြူလာ Grand Grand Prix၊ ဒူဘိုင်းသဲကန္တာရဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲစသည့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအပြင်အဘူဒါဘီနှင့်အိမ်ဖြူတော်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်အတူ။ ယူအေအီးသည် 2020 World ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့သည် ကုန်စည်ပြပွဲ.
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းခရီးသွားအေးဂျင့်, expedia.co.uk, 10 အတွက်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း 2008 ခရီးသွားနေရာများတစ်ဦးအဖြစ်အဘူဒါဘီရွေးချယ်ထားကြသည်။ ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဟာ 2012 ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးသွားဆုပေးပွဲအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရဲ့ဦးဆောင်လေဆိပ်များအတွက်ချီးမြှင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒူဘိုင်းကျော်လွန်ယူအေအီးနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်လုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကြေးခေတ်ကာလအတွင်းအခြေချ, Sharjah အမ်းမရိတ်၏ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ Sharjah စီးတီး၏အမွေအနှစ်ဧရိယာတစ်ရေကြောင်းပြတိုက်တစ်ခုအစ္စလာမ့်ပြတိုက်များနှင့်အခြားသူများအကြားအစဉ်အလာများနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဗေီအနုပညာ, အဘို့ပြတိုက်ပါဝင်သည်။
Fujairah လည်းယင်း၏သက်သက်ချောက်ကမ်းပါး, ကျောက်တောင် coves နှင့်သန္တာကျောက်တန်းများ၏ unspoiled သဘောသဘာဝအဘို့အကျော်ကြားသည် Musandam ကျွန်းဆွယ်မှ snorkeling နှင့်ရေငုပ်ခြင်းနှင့်လေ့လာရေးခရီးကမ်းလှမ်းရာမအဖြစ် Ajman, လှပသောကမ်းခြေနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဧည့်သည်များဆွဲဆောင်။
Ras Al-Khaima, အိုမန်နှင့်အတူနယ်စပ်ရက်နေ့တွင်, ကြမ်းတမ်း Hajjar တောင်တန်းများအတွက်ဒေသခံစွန့်စားမှုခရီးသွားများအတွက်အကြားဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးလူသိများသည်။
ယူအေအီးမှနယ်လှည့်အဘို့ဗီဇာ / နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
အားလုံး အင်ဒီးယန်း နှင့် အိန္ဒိယ ခြောက်လကျော်သက်တမ်းရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်ယူအေအီးသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ပြည်ပရေးရာအိန္ဒိယန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်တစ်ဦးကနှုတ် (အိန္ဒိယအစိုးရအရာရှိကြီးများ၏အမှု၌) သို့မဟုတ် (ကသံတမန်မစ်ရှင်အတွက်အလုပ်လုပ်သံတမန်များသို့မဟုတ်အရာရှိကြီးများ၏အမှု၌) သက်ဆိုင်ရာသံတမန်မစ်ရှင်ကနေ Note ကိုနှုတ်၏လကျအောကျခံ၏ .Date ၏တစ်လအတွင်းတွင်သာဖြစ်သင့်ပါတယ် ၎င်း၏ပြဿနာများ၏ရက်စွဲကို။
မြို့တော်ပေးစာထဲမှာရိုက်နှိပ်လျှောက်လွှာ Form ကို
မစုံလင်သော ဗီဇာ လျှောက်လွှာပုံစံကိုဖျော်ဖြေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံကိုသူ / သူမ၏လက်မှတ်ဘို့တာဝန်ပေးအာကာသပေါ်တွင်လျှောက်ထားသူကလက်မှတ်ရေးထိုးထားရပါမည်။
အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ။ အရာရှိများ Entry နဲ့အပြည့်အဝလိပ်စာ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ, ယူအေအီးမှာသူတို့ရဲ့သံရုံးသို့မဟုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးအဖြစ်စပွန်ဆာသီးခြားဖော်ပြထားခြင်းသငျ့သညျ။
အရောင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (အမည်စာမျက်နှာ, ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ & သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ) နှင့် Coverpage (အရောင်) ။
တဦးတည်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရွယ်အစား (paste လုပ်ထားတဲ့ခံရစေရန်) ရောင်စုံဓာတ်ပုံ။
ယူအေအီးမှခရီးသွားဘို့ 3) ခရီးသွားဗီဇာ
သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားများအတွက်ခရီးသွားဗီဇာ, ယူအေအီးအတွက်စပွန်ဆာများကစီစဉ်ပေးထားပါသည်။ ဒါဟာအစယူအေအီးအတွက်ဟိုတယ် booking ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အမ်းမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းရုံးဒါမှမဟုတ် Air ကိုအာရေဗျရုံးမှတဆင့်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအတွက်ခရီးသွားအေးဂျင့်မှတဆင့်ရယူနိုင်ပါသည်။
ဗီဇာ၏ 4) Cancellation
ယူအေအီးသံရုံးဗီဇာ cancel မထားဘူး။
သင့်ရဲ့ဗီဇာဖျက်သိမ်းရနိုင်ရန်အတွက်သင်အဘို့ဗီဇာစီစဉ်ပေးခဲ့သူယူအေအီး၌သင်တို့၏စပွန်ဆာဆက်သွယ်ပါရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့စပွန်ဆာသင်၏ယခင်ဗီဇာ cancel ဖို့တခုတည်းသောအခွင့်အာဏာရှိပါတယ်။ ဖျက်သိမ်းယခင်ဗီဇာရတဲ့မရှိရင်, သင်အသစ်တစ်ခုယူအေအီးဗီဇာမရနိုငျနှငျ့သငျယူအေအီးမှသွားလာလို့မရပါဘူး။
ခိုင်လုံသောယူအေအီး Residence ဗီဇာ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
ခိုင်လုံသောယူအေအီး Residence ဗီဇာင်တစ်ဦးကအိန္ဒိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏အရှုံး၏အမှု၌အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများသံရုံးကောင်တာမှာတင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်:
လျှောက်ထားမယ့်နှစ်ခုဖုန်းနံပတ်များ (ပုံစံ၏အောက်ခြေတွင်) နဲ့ (Type Capital ကိုပေးစာတွင်) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပုံစံတစ်ဦးကတစ်ပါတည်းဖြည့်ပျောက်ဆုံးခြင်း။
ယူအေအီး Residence Visa ရဲ့ရောင်စုံမိတ္တူ။
အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန (အဆိုပါနေ့စွဲ-of ပြဿနာထင်းရူး၏နေ့စွဲ-of ပြဿနာသစ်ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏မတိုင်မီဖြစ်သင့်) ကသက်သေအထောက်အထားအင်္ဂလိပ်အတွက်မူရင်းရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်ထင်းရူး၏တစ်ဦးမိတ္တူ။
အာရဗီ Translator ၏တံဆိပ်ခတ်နှင့်အတူပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာကအာရပျဘာသာ။
ဓာတ်ပုံရောင်စုံတစ်ခုမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် Size ကို။
- DH 300 / ၏ကြေး။
ဤစာရွက်စာတမ်းများယူအေအီးသံရုံးကောင်တာမှာတင်သွင်းနေကြသည်ပြီးတာနဲ့ entry ကိုခွင့်ပြုမိန့်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, လျှောက်ထားအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။
စာရွက်စာတမ်းများ၏သခေံခ / Legal
စာရွက်စာတမ်းများ၏ 1) သခေံခ / Legal
တစ်ဦးချင်းစီအထောက်အထားတစ်ခုအထောက်အထားများနှင့်ဆက်ဆံရေး၏သက်သေဖေါ်ပြခြင်းအပေါ်မိမိတို့စာရွက်စာတမ်းများ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အသွေးဆွေမျိုးသားချင်းများ၏စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေစာရွက်စာတမ်းများတစ်ခုတည်းသောမည်သည့်အခွင့်အာဏာအေးဂျင့်မှတဆင့်တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းများ - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စာရွက်စာတမ်းများသည့် Authorized Company ကတိုက်ရိုက်တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ (ထိုကုမ္ပဏီ၏ထမ်း & အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်၏အမည်နှင့်အတူ) ကုမ္ပဏီ Letterhead နှင့်ကုမ္ပဏီ ID ကိုအပေါ်အာဏာပိုင်အက္ခရာဤကိစ္စတွင်အတွက်လိုအပ်သည်။
2) စာရွက်စာတမ်းများ၏သခေံခ / ဥပဒေရေးရာများအတွက်ခြေလှမ်းများ
အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများ Vasant Kunj, နယူးဒေလီ, အကောင်စစ်ပုဒ်မဖွငျ့ထို့နောက်အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ကောင်စစ်ပုဒ်မနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးတယ်ဆိုတာသက်သေအထောက်အထားများနှင့်ရန်လိုသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို 'ပြည်ပရေးရာ' 'ခေံရှေ့တော်၌ထိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြည်နယ်များ၏ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားအများကြီးရှိဖို့လိုကြောင်းသတိပြုပါ။ ယင်းကောင်စစ်ပုဒ်မမှာခေံအဘို့, ယူအေအီး Dirham 156.06 စာရွက်စာတမ်းနှင့်အချိန်ကိုက်လျင်အခကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်9နေသောခေါင်းစဉ်: 00 မှ2လေး: 00 ကြာသပတေးနေ့မှ pm တွင်တနင်္လာနေ့နှင့် 9: 00 AM 12 မှ: သောကြာနေ့ 00 pm တွင်။ စာရွက်စာတမ်း3အကြား, တူညီတဲ့နေ့၌ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်: 00 မှ4pm တွင်: 00 နှင့် 2: 30 pm တွင်တနင်္လာနေ့ကကြာသပတေးနေ့ငှါ၎င်း,3သောကြာနေ့တွင် 30 pm တွင်။ မည်သည့်မေးမြန်းချက်အဘို့ကို-mail ကိုငကျေးဇူးပြုပြီးမှာ: consular@uaeembassy-newdelhi.com
အခွားသောအိမ်ထောင်ရေး, မွေးဖွားခြင်းနဲ့တူလက်မှတ်များ, အတွေ့အကြုံများ, ကျမ်းကျိန်လွှာ, ဆုံးရှုံးခဲ့ရနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ firs, ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စာရွက်စာတမ်းများ, စသည်တို့ကိုတစ်ဦးတည်းအိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနများကသက်သေအထောက်အထားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ကျန်တူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်စာရွက်စာတမ်းများများအတွက်အခကြေးငွေဒီကိစ္စကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများအတွက်အခကြေးငွေအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာတန်ဖိုးကွဲပြားခြားနားသည်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကို၏အမှု၌ယူအေအီးသံရုံးရဲ့ကောင်စစ်ပုဒ်မကိုဆက်သွယ်ပါ။
စာရွက်စာတမ်းများ၏သခေံခများအတွက် 3) အခကြေးငွေများ
ယူအေအီး Dirham အတွက်အဖိုးအခ
ပညာရေးစာရွက်စာတမ်း (ဒီပလိုမာ, ဒီဂရီ, ကျောင်းလက်မှတ်များ)
ရဲတပ်ဖွဲ့က Character လက်မှတ်
ဥပဒေရေးရာ Heirship လက်မှတ်
အဆိုပါပြေစာ Value ကိုအတူငွေတောင်းခံလွှာတန်ဖိုးများများအတွက်ဝန်ဆောင်ခ
ပြည်သူများအကြား Factor, ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်စဉ်
အတွင်းရောင်းချခဲ့သောအခါ, ထုတ်ကုန်ယူခြင်းအားဖြင့် Factor
ပြင်ပတွင်ရောင်းချခဲ့သောအခါ, ထုတ်ကုန်ယူခြင်းအားဖြင့် Factor
သစ်တစ်ခု partner ၏နိဒါန်း။
franchise - ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် (မိတ္တူတိုင်းပြည်နယ်အတွက်အခက်ဖွင့်ဖို့ကပိုတစ်ခုထက်တိုင်းပြည်ဖြန့်ဝေနေကြသည်ရှိရာ) ။
တစ်ဦးချင်းစီဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ corporate ဘဏ္ဍာရေးဘတ်ဂျက်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အေဂျင်စီများ (private / public)
Extraction of Licenses, Appointment of Branch မန်နေဂျာ,
မဲခွဲတမ်းတစ် Brnach, စီမံခန့်ခွဲမှုဖွင့်လှစ်
Cert ။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းများ၏ကုန်သည်များအသင်းဝင်၏။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော pre-certified ရရှိထားပြီးအေဂျင်စီများမဆိုတစ်ဦးမိတ္တူ။
ငွေတောင်းခံလွှာများအတွက် 5) အခကြေးငွေများ
ယူအေအီးမဆိုအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုကနေရဲရှင်းလင်းရေးလက်မှတ်ရရန်အလို့ငှာခုနှစ်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည်သူ၏လက်ဗွေရာထို့နောက်မိမိအပြည်နယ်၏နေအိမ်ဝန်ကြီးဌာနအားဖြင့်၎င်း, ထို့နောက်ပြင်ပဝန်ကြီးဌာနတို့က, သူ့မြို့ဒေသခံရဲစခန်းအားဖြင့်အနက်ရောင်မှင်အတွက်သက်သေအထောက်အထားအများကြီးရှိဖို့ရှိပါတယ် အိန္ဒိယရေးရာ။ သူတို့ရဲ့ဒေလီရုံး၏လိပ်စာအိန္ဒိယဂိတ်အနီးကောင်စစ်ပုဒ်မ, Patiala အိမ်, Tilak Marg ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏အခြားရုံးများချင်နိုင်း, ဂိုဟားသီး Guwahati Hyderabad နှင့်ကာလကတ္တား၌ရှိကြ၏။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းလည်းတိုက်ရိုက်သည်သူ၏လက်ဗွေရာအမှုကိုပြုရ Patiala အိမ်များတွင်လက်ဗွေဆဲလ်ချဉ်းကပ်နိုင်ပါ။9မှ 00 နံနက်: ခေံလက်ညှိုးကိုထုတ် 12 ထံမှယူအေအီးသံရုံး (တစ်ခုခုကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်ဖြစ်စေ, မိမိအသွေးဆွေမျိုးသားချင်းများကတဆင့်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်အေးဂျင့်မဆိုတဆင့်) အတွက်တင်သွင်းခံရဖို့ပြီးတော့များမှာ 00 ညနေတနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ရန်။ Rs.3,750 / - ငွေသားလက်မှတ်လျင်အခကြေးငွေဖြစ်ပြီး, စာရွက်စာတမ်း3အကြား, တူညီတဲ့နေ့၌ပြန်ပြန်ရောက်လိမ့်မည်ဟု: 00 ညနေများနှင့် 4: 00 ညနေ။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြည်ထဲရေးအေဂျင်စီများများ၏စိုးရိမ်ပူပန်န်ကြီးဌာနရန်သင့် packet ကိုပေးပို့ပါ။ စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းမပြုမီ, လိုအပ်သောအခကြေးငွေအပေါ်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိရန်ယူအေအီးရုံးကိုပဌနာနှင့်သေချာသင်သင့်လျော်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သူတို့ကိုမပို့နေစေပါ။
ဖက်စ်: 971-4-2171512 / 2660151
ရဲဌာန - အဘူဒါဘီ
ငါတို့သည်သင်တို့၏မိတ်ဆွေတစ်သင့်ကိုယ်စားအပေါ်ရဲဌာနထံမှလက်မှတ်ရယူနိုင်အောင်, ယူအေအီးအတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှစာရွက်စာတမ်းများမပေးပို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်အလွန်ရဲဌာနကိုတိုက်ရိုက်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါအပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
အောက်တွင်ထိန်းချုပ်ထားဆေးဝါးများနှင့်ဆေးများ၏စာရင်းကို, ယူအေအီးအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏မှတ်ပုံတင်နှင့်ယူအေအီးပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ (INCB) ကပြဌာန်းသည်။
+ 848 97126313: နောက်ထပ်မေးမြန်းချက်အဘူဒါဘီ, PO Box 742, ဖက်စ်အတွက်ကျန်းမာရေးရဲ့မူးယစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးဌာနယူအေအီးန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားနိုင်ပါသည်။
အောက်ပါစာရင်းအမှတ်စဉ်နံပါတ်, ကုန်သွယ်မှုအမည်, ယေဘုယျအမည်နှင့်ဆေးဝါးများ၏ပုံစံကိုပြသသည်။
1, 123 အအေး Tablet များ, Codeine ဖော့စဖိတ် 8mg, Acetaminophen 325mg, Cafeine 30mg, Carbinoxamine maleate 3.06mg, Phenylephrine 5mg, Tablet များ
2, ABILIFY 10mg, Aripiprazole 10mg, Tablet များ
3, ABILIFY 15mg, Aripiprazole 15mg, Tablet များ
4, ABILIFY 20mg, Aripiprazole 20mg, Tablet များ
5, ABILIFY 30mg, Aripiprazole 30mg, Tablet များ
6, ACTIFED ဝင်း linctus, Codeine Phosphate10mg, Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg / 5ml, Linctus
8, ACTIVELLE, Estradiol & Norethisterone, Tablet များ
9, ADOL အအေး, Dextromethorphan HBr 15mg, Pseudoephedrine HCL 30mg, Paracetamol 325mg, Caplets
10, ADOL အအေး HOT ကုထုံး, Paracetamol 650mg, Pseudoephedrine HCL 60.0 မီလီဂရမ်, Dextrometorphan HBr 30.0 မီလီဂရမ်, ထုပ်
11, ADOL ဝင်း, Codeine ဖော့စဖိတ် 10mg, Paracetamol 150mg, Cafeine 50mg, Salicylamide 200mg, Tablet များ
12, AKINETON 2mg, Biperiden HCL 2mg, Tablet များ
13, AKINETON 5mg, Biperiden နို့တိုက် 5mg / ml, Injection
14, AKINETON နှောင့်နှေး 4mg, Biperiden HCL 4mg, Tablet များ
15, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, Tablet များ
16, ALGAPHAN, Propoxyphene HCL 75mg Chlorobutanol 10 မီလီဂရမ် / 2ml, Injection
17, ANAFRANIL 10, Clomipramine HCL 10 မီလီဂရမ်, Tablet များ
18, ANAFRANIL 25, Clomipramine HCL 25 မီလီဂရမ်, Tablet များ
19, ANAFRANIL SR 75, Clomipramine HCL 75 မီလီဂရမ်, Tablet များ
20, ANDRIOL 40mg, testosterone undecanoate 40mg, Capsule
23, ARTANE 2, Benzhexol HCL2မီလီဂရမ်, Tablet များ
24, ARTANE 5, Benzhexol HCL 5mg, Tablet များ
25, ARTHROTEC 50, Misoprostol 0.2mg Diclofenac ဆိုဒီယမ် 50mg, Tablet များ
26, ATIVAN 1, Lorazepam 1mg, Tablet များ
27, AURIMEL, Carbinoxamine maleate 2mg, Dextromethorphan HBr 5mg, Phenylephrine HCL 5mg, ဆိုဒီယမ် citrate 325 မီလီဂရမ် / 5ml, ရည်
28, AURORIX 100, Moclobemide 100mg, Tablet များ
29, AURORIX 150, Moclobemide 150mg, Tablet များ
30, AURORIX 300, Meclobemide 300 မီလီဂရမ်, Tablet များ
32, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, Tablet များ
34, BEPRO, Papaverine HCL 12.5mg, Codeine ဆာလဖိတ် 125mg, ကယ်လ်ဆီယမ် iodide 1gm, glycerin 5gm / 100ml, ရည်
35, BRONCHOLAR, Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg, Ephedrine HCl 7.5mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml, အရောအနှော
36, BRONCHOLAR Fort, Dextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg, Guaifenesin 50mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml, အရောအနှော
37, BRONCHOPHANE, Dextromethorphan HBr 125mg Diphenydramine HCl 100mg, Ephedrine HCl 150mg, Guaifenesin 1gm / 100ml, ရည်
38, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, Tablet များ
39, BUSPAR 10, Buspirone HCL 10mg, Tablet များ
40, BUSPAR 30 မီလီဂရမ်, Buspirone HCl 30 မီလီဂရမ်, Tablet များ Dividose
41, BUSPAR 5, Buspirone HCL5မီလီဂရမ်, Tablet များ
42, CAMCOLITE 250, လီသီယမ်ကာဗွန် 250mg, Tablet များ
43, CAMCOLITE 400, လီသီယမ်ကာဗွန် 400mg, Tablet များ
44, CANTOR 50, Minaprine 50mg, Tablet များ
45, CELLCEPT 250mg, Mycophenolate mofetil 250mg, Capsule
46, CELLCEPT 500mg, Mycophenolate mofetil 500mg, Capsule
47, CIPRALEX 10mg, Escitalopram (Escitlopram oxalate ကဲ့သို့) 10mg / တက်ဘလက်, Tablet များ
48, Cipralex 10mg, Escitalopram, Tablet ကို
49, CIPRALEX 15mg, Escitalopram (Escitlopram oxalate ကဲ့သို့) 15mg / တက်ဘလက်, Tablet များ
50, Cipralex 15mg, Escitalopram, Tablet ကို
51, CIPRALEX 20mg, Escitalopram (Escitlopram oxalate ကဲ့သို့) 20mg / တက်ဘလက်, Tablet များ
52, Cipralex 20mg, Escitalopram, Tablet ကို
53, CIPRALEX 5mg, Escitalopram (Escitlopram oxalate ကဲ့သို့) 5mg / တက်ဘလက်, Tablet များ
54, CIPRAM 20, Citalopram 20 မီလီဂရမ်, Tablet များ
55, CLIMEN, Micronised Estradiol valerate (ပန်းရောင်) 2mg / 1tab, Micronised Estradiol valerate (အဖြူ) 2mg / 1tab, Micronised Cyproterone Acetate (ပန်းရောင်) 1mg / 1 tab ကို။ , Tablet များ
56, CLOPIXOL 2, Zuclopenhtixol diHCL 2mg, Tablet များ
57, CLOPIXOL 25, Zuclopenhtixol diHCL 25mg, Tablet များ
61, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, Tablet များ
63, CODAPHED, Codeine ဖော့စဖိတ် 8mg Chlorpheniramine maleate 2mg, Ephedrine HCL 15mg / 10ml, ရည်
64, Codaphed Plus အား, Chlorpheniramine Maleate Ephedrine HCl, Codeine ဖော့စဖိတ်, Ammonium Chloride, ရည်
65, CODILAR, Dextromethorphan HBr100mg Phenylephrine HCL 40mg, Chlorpheniramine maleate 20mg / 100ml, ရည်
66, CODIPRONT, Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Capsule
67, CODIPRONT, Codeine 11.1mg, Phenyltoloxamine 3.7mg / 5ml, ရည်
68, CODIPRONT cum Exp ။ , Codeine 200mg, Guaiphenesine 1gm, Phenyltoloxamine 66mg, စမုန်ဖြူ Ext ။ 1gm / 100gm, ရည်
69, CODIPRONT cum Exp ။ , Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Guaifenesin 100mg, Tablet များ
70, Cody, အက်စပရင် 500 မီလီဂရမ်, Codeine ဖော့စဖိတ် 8 မီလီဂရမ်, Tablet များ
71, COLDEX-D ကို, Dextromethorphan HBr 10mg, Pseudoephedrine HCl 30mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg, Glyceryl guaicolate 50mg / 5ml, ရည်
72, CYTOTEC, Misoprostol 200mcg, Tablet များ
73, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, Tablet များ
77, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, Tablet များ
78, DEXTROKUF, Dextromethorphan HBr 15mg / 5ml, ရည်
79, DEXTROLAG, Dextromethorphan HBr 10mg, Guaifenesin 100mg, Chlorpheniramine maleate 2mg, Amonium ကလိုရိုက် 25mg / 5ml, ရည်
80, DHC အစဉ်မပြတ်, Dihydrocodeine tartrate 60mg, Tablet များ
81, DIALAG microclysma, Diazepam 5mg / 2.5ml, Rectal ဖြေရှင်းချက်
82, DIALAG microclysma, Diazepam 10mg / 2.5ml, Rectal ဖြေရှင်းချက်
83, DIAPAM 10, Diazepam 10mg, Tablet များ
84, DIAPAM 2, Diazepam 2mg, Tablet များ
85, DIAPAM 5, Diazepam 5mg, Tablet များ
86, DIARSED, Diphenoxylate HCL 2.5mg, Atropine ဆာလဖိတ် 0.025mg, Tablet များ
87, DIAXINE, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine ဆာလဖိတ် 0.025mg, Tablet များ
88, DIAZEPAM 2, Diazepam 2mg, Tablet များ
89, DIAZEPAM 5, Diazepam 5mg, Tablet များ
90, DICTON 30, Codeine 11mg, Carbinoxamine 1.5mg / 5ml, ရည်နှောင့်နှေး
91, DIPRIVAN 1% IV ပြုတ်ရည်, v / w း, Propofol 1.00% / w
/ v, Propofol 92mg / 2ml, IV ပြုတ်ရည် w 20, DIPRIVAN 1%
93, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Tablet များ
94, DOGMATIL 100, Sulpiride 100 မီလီဂရမ် / 2ml, Injection
95, DOGMATIL 25mg / 5ml, Sulpiride 25mg / 5ml, ဖြေရှင်းချက်
96, DOGMATIL 50, Sulpiride 50 မီလီဂရမ်, Capsule
97, DOGMATIL Fort, Sulpiride 200 မီလီဂရမ်, Tablet များ
98, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, Tablet များ
101, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, Tablet များ
102, DORSILON, Mephenoxalone 200mg, Paracetamol 450mg, Tablet များ
103, EDRONAX 4mg, Reboxetine 4mg, Tablet များ
104, EFEXOR 37.5, Venlafaxine 37.5mg, Tablet များ
105, EFEXOR 75, Venlafaxine 75mg, Tablet များ
106, EFEXOR XR 150, Venlafaxine Hydrochloride 150mg, Capsule
107, EFEXOR XR 75, Venlafaxine Hydrochloride 75mg, Capsule
108, ESTRACOMB ၏ TTS, Oestradiol 4mg, Norethisterone acetate 30mg (Patch 1) + Oestradiol 10mg (Patch 2), Patch ကို
109, ESTRADERM ၏ TTS 100, Estradiol 8mg / 20cm2, Patch ကို
110, ESTRADERM ၏ TTS 25, Estradiol 2mg / 5cm2, Patch ကို
111, ESTRADERM ၏ TTS 50, Estradiol 4mg / 10cm2, Patch ကို
112, ESTROFEM, Oestradiol 2mg, Tablet များ
113, ESTROFEM Fort, Oestradiol 4mg, Tablet များ
114, FAVERIN 100, Fluvoxamine maleate 100mg, Tablet များ
115, FAVERIN 50, Fluvoxamine maleate 50mg, Tablet များ
116, FEMOSTON2/ 10, Dydrogesterone (Y ကို) 10mg, Estradiol (အို) 2.0mg, Estradiol (Y ကို) 2.0mg, Tablet များ
117, FLEXIBAN, Cyclobenzaprine HCL 10mg / tab ကို။ , Tablet များ
118, FLUANXOL 0.25, Flupenthixol 0.25mg, Tablet များ
119, FLUANXOL 0.5, Flupenthixol 0.5mg, Tablet များ
120, FLUANXOL 1, Flupenthixol 1mg, Tablet များ
121, FLUANXOL 3, Flupenthixol 3mg, Tablet များ
124, FLUOXONE DIVULE, Fluoxetine 22.4mg, Capsule
126, FLUTIN 20mg, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Capsule
127, FLUXETYL 20mg, Fluoxetine 20mg / ဆေးတောင့် (အက်ဖ် Hydrochloride ကဲ့သို့), Capsule
128, FRISIUM 10, Clobazam 10 မီလီဂရမ်, Tablet များ
129, FRISIUM 20, Clobazam 20 မီလီဂရမ်, Tablet များ
130, GARDINAL ဆိုဒီယမ်, Phenobarbitone ဆိုဒီယမ် 200mg / ml, Injection
131, GENOTROPIN 16 IU သည် (5.3mg), Somatropin 16IU / 1Cartridge, Powder Injection ကိုများအတွက်
132, GENOTROPIN 36 IU သည် (5.3mg), Somatropin 36IU / 1Cartridge, Powder Injection ကိုများအတွက်
133, HALDOL 0.5, Haloperidol 0.5mg, Tablet များ
134, HALDOL 2mg / ml, Haloperidol 2mg / ml, စစ်သွေးကြွ
135, HALDOL 5, Haloperidol 5mg, Tablet များ
139, HEMINEVRIN, Chlormethiazole 300mg, Miglyol (812) 125mg, Capsule
140, IMUKIN 100mcg / 0.5ml, Recombinant လူ့ interferon-gamma 6000000 IU သည် / ml, Injection ကို *
141, INSIDON 50, Opipramol 50mg, Tablet များ
142, INTARD, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine ဆာလဖိတ် 0.025mg, Tablet များ
143, INTRAVAL, Thiopentone ဆိုဒီယမ် 0.5g / 1vial, Injection
144, IXEL 25mg, Milnacipran 25mg / ဆေးတောင့်, Capsule
145, IXEL 50mg, Milnacipran 505mg / ဆေးတောင့်, Capsule
146, KAFOSED, Dextromethorphan HBr 15mg / 5ml, ရည်
148, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, Tablet များ
151, KLIOGEST, Oestradiol 2mg, Norethisterone 1mg, Tablet များ
152, LAGAFLEX, Carisoprodol 300 မီလီဂရမ်, Paracetamol 250mg, Tablet များ
153, LARGACTIL, Chlorpromazine HCL 25mg / 5ml, ရည်
154, LARGACTIL 10, Chlorpromazine HCL 10mg, Tablet များ
155, LARGACTIL 100, Chlorpromazine HCL 100mg, Tablet များ
156, LARGACTIL 25, Chlorpromazine HCL 25mg, Tablet များ
158, LARGACTIL 50, Chlorpromazine HCL 50mg, Tablet များ
160, LARGACTIL100, Chlorpromazine HCL 100mg, Suppo ။
161, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 မီလီဂရမ်, Tablet များ
162, LEXOTANIL 3, Bromazepam3မီလီဂရမ်, Tablet များ
163, LEXOTANIL 6, Bromazepam6မီလီဂရမ်, Tablet များ
164, LIMBITROL, Amitriptyline 12.5 မီလီဂရမ်, Chlordiazepoxide5မီလီဂရမ်, Capsule
165, LIORESAL 10, Baclofen 10 မီလီဂရမ်, Tablet များ
166, LIORESAL 25, Baclofen 25 မီလီဂရမ်, Tablet များ
167, LOMOTIL, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine ဆာလဖိတ် 0.025mg, Tablet များ
168, LUDIOMIL 10, Maprotiline HCL 10mg, Tablet များ
169, LUDIOMIL 25, Maprotiline HCL 25mg, Tablet များ
170, LUDIOMIL 50, Maprotiline HCL 50mg, Tablet များ
171, LUDIOMIL 75, Maprotiline HCL 75mg, Tablet များ
172, MELLERIL 0.5%, Thioridazine HCL 0.5%, Susp ။
173, MELLERIL 10, Thioridazine HCL 10mg, Tablet များ
174, MELLERIL 100, Thioridazine HCL 100mg, Tablet များ
175, MELLERIL 25, Thioridazine HCL 25mg, Tablet များ
176, MELLERIL 50, Thioridazine HCL 50mg, Tablet များ
178, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg, Paracetamol 450mg, Tablet များ
179, MYOGESIC, Orphenadrine 35mg, Paracetamol 450mg, Tablet များ
180, NEOTIGASON 10, Acitretin 10 မီလီဂရမ်, Capsule
181, NEOTIGASON 25, Acitretin 25 မီလီဂရမ်, Capsule
184, NOCTRAN 10, Clorazepate dipotassium 10mg, Acepromazine maleate 1.016mg, Aceprometazine maleate 10.16mg, Tablet များ
185, NORACOD, Codeine 10mg, Paracetamol 500mg, Tablet များ
186, NORCURON 10mg, Vecuronium ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine 10mg / ampoule, ဆေးထိုးဘို့ Powder
187, NORCURON 4mg, Vecuronium ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine 4.0mg / ampoule, ဆေးထိုးဘို့ Powder
188, NORDITROPIN 12IU, Somatropine 12 IU သည်, Injection
189, NORDITROPIN 4IU, Somatropine4IU သည်, Injection
190, NORDITROPIN ကလောင် 12, Somatropine 12 IU သည်, Injection S ကို A / C ကိုသတ်မှတ်
191, NORDITROPIN ကလောင် 24, Somatropine 24 IU သည်, Injection S ကို A / C ကိုသတ်မှတ်
5mg / 1.5 ml, Somatropin, Prefilled ကလောင်အတွက် Inj
10mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj ။ Prefilled ကလောင်အတွက်
15mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj ။ Prefilled ကလောင်အတွက်
199, NORFLEX 100, Orphenadrine citrate 100mg, Tablet များ
200, NORGESIC, Orphenadrine citrate 35mg Paracetamol 450mg, Tablet များ
203, NuvaRing ဆေးကွင်း, Etonogestrel & Ethinylestradiol, အင်္ဂါဇာတ် Ring ကို
204, ORAP, Pimozide 1mg, Tablet များ
205, ORAP Fort, Pimozide 4mg, Tablet များ
206, OXETINE, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Tablet များ
207, PARACODOL, Codeine ဖော့စဖိတ် 8mg, Paracetamol 500mg, Eff.Tab ။
208, PARACODOL, Codeine ဖော့စဖိတ် 8mg, Paracetamol 500mg, Tablet များ
209, PHENSEDYL, Codeine ဖော့စဖိတ် 8.9mg Promethazine HCL 3.6mg Ephedrine HCL 7.2mg / 5ml, Linctus
211, PHYSEPTONE 5, Methadone HCL 5mg, Tablet များ
212, PREPULSID, Cisapride 1mg / ml, ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား
213, PREPULSID, Cisapride 30mg, Supp ။
214, PREPULSID 10mg, Cisapride 10mg, Tablet များ
215, PREPULSID 5mg, Cisapride 5mg, Tablet များ
216, PRIMOTESTONE သိုလှောင်ရုံ 100mg, testosterone Enanthate 110mg, testosterone Propionate 25mg, = testosterone 100mg / ml, Injection
217, PRIMOTESTONE သိုလှောင်ရုံ 250mg, testosterone enanthate 250mg / 1ml, Injection
218, PROGYLUTON, Estradiol valerate 2mg / 11white tab ကို။ , Estradiol valerate 2mg & Norgestrol 0.5mg / 10 လိမ္မော်ရောင် tab ကို။ , Tablet များ
219, PROKINATE, Cisapride 5mg / 5ml, ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား
220, PROKINATE 10mg, Cisapride 10mg, Tablet များ
221, PROKINATE 5mg, Cisapride 5mg, Tablet များ
223, PROPESS, တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E2 10mg / pessary, အင်္ဂါဇာတ် Pessaries
225, PROTHIADEN 75, Dothiepin HCl 75mg, Tablet များ
226, PROVIRON, Mesterolone 25mg, Tablet များ
227, PROZAC, Fluoxetine 20mg, Tablet များ
228, PROZAC, Fluoxetine 20mg / 5ml, အရည်
229, (အက်ဖ် Hydrochloride ကဲ့သို့) PROZAC အပတ်စဉ် 90mg, Fluoxetine 90mg / ဆေးတောင့်, Capsule
230, REDUCTIL 10mg, Sibutramine Hydrochloride Monohydarte 10mg, Capsule
231, REDUCTIL 15mg, Sibutramine Hydrochloride Monohydarte 15mg, Capsule
232, REMERON 15 မီလီဂရမ်, Mirtazapine 15mg, Tablet များ
233, REMERON 30 မီလီဂရမ်, Mirtazapine 30mg, Tablet များ
234, REMERON 45 မီလီဂရမ်, Mirtazapine 45mg, Tablet များ
235, Remeron Sol Tab ကို 30mg, Mirtazapine, Tablet များ
236, REVACOD, Codeine ဖော့စဖိတ် 10mg, Paracetamol 500mg / 1 tab ကို။ , Tablet များ
237, RHINOTUSSAL, Dextromethorphan HBr 20mg Phenylephrine HCL 20mg, Carbinoxamine maleate 4mg, Capsule
238, RIAPHAN 15mg / 5ml, Dextromethorphan HBr 15mg / 5ml, ရည်
239, RISPERDAL 1, Risperidone 1mg, Tablet များ
240, RISPERDAL 1mg / ml, Risperidone 1mg / 1ml, ခံတွင်းဖြေရှင်းချက်
241, RISPERDAL 2, Risperidone 2mg, Tablet များ
242, RISPERDAL 3, Risperidone 3mg, Tablet များ
243, RISPERDAL 4, Risperidone 4mg, Tablet များ
244, Risperidal Consta 25mg, Risperidone, Inj / ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား
245, Risperidal Consta 37.5 မီလီဂရမ်, Risperidone, Inj / ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား
246, Risperidal Consta 50 မီလီဂရမ်, Risperidone, Inj / ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား
247, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, Tablet များ
248, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg / 1tab ။ , Tablet များ
249, RIVOTRIL 0.25%, Clonazepam 0.25%, စစ်သွေးကြွ
250, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 မီလီဂရမ်, Tablet များ
252, RIVOTRIL 2, Clonazepam 2mg, Tablet များ
258, ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, Tablet များ
259, ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg, အက်စပရင် 325mg, Tablet များ
260, ROBITUSSIN-CF, Dextromethorphan HBr 10mg, Guaifenesin 100mg, Pseudoephedrine HCl 30mg / 5ml, ရည်
261, ROMILAR 1.5%, Dextromethorphan 15mg / ml, စစ်သွေးကြွ
263, ROMILAR EXPECTORANT, Dextromethorphan 3.06mg, Ammonium ကလိုရိုက် 18mg, Panthenol 11mg / 1ml, ရည်
264, SAIZEN4IU သည်, Somatropine4IU သည်, Injection
265, SALIPAX, Fluoxetine 20mg, Capsule
270, SAROTEN နှောင့်နှေး 25, Amitriptyline HCL 25 မီလီဂရမ်, Capsule
271, SAROTEN နှောင့်နှေး 50, Amitriptyline HCL 50 မီလီဂရမ်, Capsule
272, SEDOFAN DM, Dextromethorphan HBr 10mg Triprolidine 1.25mg, Pseudoephedrine HCL 30mg / 5ml, ရည်
273, SEDOFAN-P ကို, Dextromethorphan HBr 15mg, Tablet များ
274, SERENACE 0.5, Haloperidol 0.5mg, Tablet များ
275, SERENACE 1.5, Haloperidol 1.5mg, Tablet များ
276, SERENACE 10, Haloperidol 10mg, Tablet များ
277, SERENACE 5, Haloperidol 5mg, Tablet များ
278, SEROQUEL 100 မီလီဂရမ်, Quetiapine 100 မီလီဂရမ်, Tablet များ
279, SEROQUEL 200 မီလီဂရမ်, Quetiapine 200 မီလီဂရမ်, Tablet များ
280, SEROQUEL 25 မီလီဂရမ်, Quetiapine 25 မီလီဂရမ်, Tablet များ
281, SEROQUEL လူနာ Starter Pack ကို, Quetiapine 100 မီလီဂရမ် / tab ကို။ (2 တက်ဘလက်များ), Quetiapine 25 / tab ကို MG ။ (6 တက်ဘလက်များ), Tablet များ
282, SEROXAT 20, Paroxetine 20mg, Tablet များ
283, SERZONE 100mg, Nefazodone HCL 100mg, Tablet များ
284, SERZONE 150mg, Nefazodone HCL 150mg, Tablet များ
285, SERZONE 200mg, Nefazodone HCL 200mg, Tablet များ
286, SERZONE 250mg, Nefazodone HCL 250mg, Tablet များ
287, SERZONE 50mg, Nefazodone HCL 50mg, Tablet များ
288, SIRDALUD 2, Tizanidine 2mg, Tablet များ
289, SIRDALUD 4, Tizanidine 4mg, Tablet များ
290, SOMADRYL ဝင်း, Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg, သလိုမျိုးကက်ဖိန်းဓာတ် 32mg, Tablet များ
293, SOSEGON 50mg, Pentazocine HCL 56.4mg, Tablet များ
294, ST.JOSEPH ချောင်းဆိုးခြင်း, Dextromethorphan HBr 0.1179% w / w, ရည်
298, STELAZINE 1, Trifluoperazine 1mg, Tablet များ
299, STELAZINE 10, Trifluoperazine 10mg, Capsule
302, STELAZINE 5, Trifluoperazine 5mg, Tablet များ
303, STEMETIL, v / w Prochlorperazine maleate 0.1% ရည်
304, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg, Tablet များ
305, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 5mg, Tablet များ
308, STERANDRYL နှောင့်နှေး 250mg, testosterone Hexahydrobenzoate 125mg, n-butyl နှင့် testosterone 125mg / ampoule ၏ Trans-hexahydroterephtalate, Injection
309, STESOLID, Diazepam 0.4mg / ml, ရည်
310, STESOLID, Diazepam 2mg, Tablet များ
311, STESOLID, Diazepam 5mg, Tablet များ
313, STESOLID, Diazepam 5mg / 2.5ml, Rectal ဖြေရှင်းချက်
314, STESOLID, Diazepam 10mg / 2.5ml, Rectal ဖြေရှင်းချက်
315, STILNOX 10mg, Zolpidem Tartrate 10mg / 1 tab ကို။ , Tablet များ
317, SUBUTEX 2mg, Buprenorphine HCL 2mg / 1tab ။ , Tablet များ
318, SUBUTEX 8mg, Buprenorphine HCL 8mg / 1tab ။ , Tablet များ
319, SURMONTIL 25, Trimipramine maleate 35mg, Tablet များ
320, SURMONTIL 50, Trimipramine maleate 69.75mg, Capsule
324, TEMGESIC 0.3mg / ml, Buprenorphine HCL 0.3 Injection, / ml ကို mg
326, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 မီလီဂရမ်, Tablet များ
327, TIAPRIDAL 100, Tiapride 100mg, Tablet များ
329, TICLID, Ticlopidine 250mg, Tablet များ
331, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, Tablet များ
332, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, Tablet များ
333, TRAMAL 100mg, Tramadol 100mg, Supp ။
335, TRAMAL 100mg / ml, Tramadol 100mg / ml, Drop
338, TRAMAL နှောင့်နှေး 100, Tramadol 100mg, Tablet များ
339, TRAMUNDIN နှောင့်နှေး 100 မီလီဂရမ်, Tramadol 100mg, Tablet များ
340, TRAMUNDIN နှောင့်နှေး 150 မီလီဂရမ်, Tramadol 150mg, Tablet များ
341, TRAMUNDIN နှောင့်နှေး 200 မီလီဂရမ်, Tramadol 200mg, Tablet များ
342, TRANXENE 10, Clorazepate dipotassium 10mg, Capsule
343, TRANXENE 5, Clorazepate dipotassium 5mg, Capsule
344, TREXAN 50, Naltrexone HCL 50mg, Tablet များ
345, TRISEQUENS, Oestradiol 2mg (အပြာရောင် tab ကို), Oestradiol 2mg, Norethisterone acetate 1mg (အဖြူ tab ကို), Oestradiol 1mg (အနီရောင် tab ကို), Tablet များ
346, Fort, Oestradiol 4mg (အဝါရောင် tab ကို), Oestradiol 4mg, Norethisterone acetate 1mg (အဖြူ tab ကို), Oestradiol 1mg (အနီရောင် tab ကို), Tablet များ TRISEQUENS
347, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 မီလီဂရမ်, Tablet များ
348, TUSCALMAN, Noscapine HCL 15mg, Aether Guaiacolglycerinatus 100mg / 10ml, ရည်
349, codeine နှင့်အတူ TUSSIFIN, Codeine ဖော့စဖိတ် 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg, Glyceryl guaicolate 1gm, ဆိုဒီယမ် benzoate 3gm, ပိုတက်ဆီယမ် citrate 3gm, Liquorice 7.5gm / 100ml, ရည်
350, ULTIVA 1mg, Remifentanil 1mg / ဖလားကို, Injection
351, ULTIVA 2mg, Remifentanil 2mg / ဖလားကို, Injection
352, ULTIVA 5mg, Remifentanil 5mg / ဖလားကို, Injection
353, ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး DM, Triprolidine HCl 1.25 မီလီဂရမ်, Pseudoephedrine (HCl) 30mg, Dextromethorphan HBr 10 မီလီဂရမ် / 5ml, ရည်
354, VALIUM, Diazepam 2mg / 5ml, ရည်
356, VALIUM 10, Diazepam 10mg, Tablet များ
357, VALIUM 2, Diazepam 2mg, Tablet များ
358, VALIUM 5, Diazepam 5mg, Tablet များ
Injection 359mg, Vecuronium ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine 10mg / 10 ဖလားကို FOR 1, VECURONIUM ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine, Injection ကိုများအတွက် Powder
Injection 360mg, Vecuronium ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine 20mg / 20 ဖလားကို FOR 1, VECURONIUM ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine, Injection ကိုများအတွက် Powder
361, VESANOID 10mg, Tretinoin 10mg, Capsule
363, VIRORMONE 10mg, testosterone Propionate 10mg, Tablet များ
364, VIRORMONE 25mg, testosterone Propionate 25mg, Tablet များ
366, XANAX 0.25, Alprazolam 0.25 မီလီဂရမ်, Tablet များ
367, XANAX 0.5, Alprazolam 0.5 မီလီဂရမ်, Tablet များ
368, XANAX 1, Alprazolam 1 မီလီဂရမ်, Tablet များ
370, ZOLOFT, Sertraline 50mg, Tablet များ
371, ZYPREXA 10 မီလီဂရမ်, Olanzapine 10 မီလီဂရမ်, Tablet များ
372, ZYPREXA 10 မီလီဂရမ်, Olanzapine 10 မီလီဂရမ်, Injection
373, ZYPREXA5မီလီဂရမ်, Olanzapine5မီလီဂရမ်, Tablet များ
374, ZYPREXA 7.5 မီလီဂရမ်, Olanzapine 7.5 မီလီဂရမ်, Tablet များ
အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ / ဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း & စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Ajman ကုန်သည်ကြီးများအသင်း စီစဉ်ကော်မရှင်
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း & စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဒူဘိုင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဓာတု & ဓါတ်မြေသြဇာ၏န်ကြီးဌာန
ဖက်ဒရယ်အမျိုးသားကောင်စီ ကျောက်မီးသွေး & သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ယူအေအီးကုန်သည်များအသင်းချုပ် & စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များန်ကြီးဌာန
စီးပွားရေး & စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
လျှပ်စစ်မီး & ရေဝန်ကြီးဌာန ကော်ပိုရိတ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန စားသုံးသူရေးရာ & ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးဝန်ကြီးဌာန
ပညာရေး & လူငယ်ဝန်ကြီးဌာန Disinvestment ဝန်ကြီးဌာန
ဘဏ္ဍာရေး & စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်သစ်တောများ
Sharjah မြူနီစီပယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း & စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Sharjah ကုန်သည်ကြီးများအသင်း စားနပ်ရိက္ခာထုတ်ယူခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန
နောက်ကျောလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်ထက်ပိုပြီးဖို့ခြိနျးတှေ့ရသောအိန္ဒိယနှင့်အတူယူအေအီးရဲ့စီးပွားရေး, နိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလင့်များ, ရင့်ကျက်နေကြသည်နဲ့ multi-dimensional ။ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတဖြည်းဖြည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးထွားလာခဲ့ပြီးလူပေါင်း-to-လူတွေအဆက်အသွယ်စီးပွါးအပေါ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှခရီးသွားဧည့်အားလပ်နှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအဘို့အသွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပို. ပို. ယူအေအီးနိုင်ငံသားများအိန္ဒိယတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဆောက်အဦ၏ availing နေကြသည်။
အိန္ဒိယအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်နိုင်ငံသားများအကြားနီးကပ်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အိန္ဒိယအသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကို 1.5 သန်းအရအေတှကျ, ယူအေအီးတွင်အကြီးဆုံးပြည်ပရှိအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထံမှစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ ယူအေအီးနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၏အားကြီးသောခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်လနှင့်လာနှစ်အတွင်းနောက်ထပ်ပိုမိုစုံလင်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏ဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းနေကြသည်။
ယူအေအီး Talmiz Ahmed ကအိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူအင်တာဗျူး၏ကောက်နှုတ်ချက်။
အိန္ဒိယ-ယူအေအီးဆက်ဆံရေး upswing အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဆှဖှေဲ့၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုဝေမျှနှင့်ခိုင်ခံ့သောစီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးချဲ့ဆက်ဆံမှုနှစ်ဦးစလုံးလူမျိုးအဘို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောဖြစ်ကြောင်း, စီးပွားရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလယ်ကွင်းများ၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်း။
ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများနှင့်အတူအိန္ဒိယကြီးထွားလာကြားဆက်ဆံရေးအထူးသဖြင့်ယူအေအီးမှတစ်ဦးကအရှိန်အဟုန်, ဇွန်လတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Shaikh Abdullah ကဘင် Zayed Al-Nahyan ၏ခရီးစဉ်များကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး, ဒေသဆိုင်ရာအခြေအနေလုံခြုံရေး, ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အပါအဝင်ဘာသာရပ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ပေါ်တွင်အသီးအနှံများနှင့်သိသိသာသာဆွေးနွေးမှုများရှိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကနေပြည်ပရေးရာ၏ထို့နောက်ဝန်ကြီး Pranab Mukherjee နှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီး Kamal Nath အသီးသီးမေလနှင့်ဧပြီလ 2008 အတွက်ယူအေအီးသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကုန်သွယ်ရေးနှင့်တစ်ဦးတည်းကစီးပွားရေးရှုထောင့်ကဆုံးဖြတ်ကြသည်မဟုတ်။ အင်ဒီးယန်းရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားခဲ့ကြတာရှည်ရှေ့တော်၌ထိုယူအေအီးအတွက်စည်းဝေးကြ၏။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်အတူတက်ကြွစွာမိတ်ဖက်ခဲ့ကြပြီ။ ယူအေအီးခေါင်းဆောင်များတော်တော်များများအခါသမယအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်များတွင်အိန္ဒိယလူမျိုးဖြင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
အိန္ဒိယနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံရေးသက်တမ်းတိုးဖို့နှင့်ခိုင်ခံ့စေဖို့ခိုင်မာတဲ့အားထုတ်မှုလုပ်နေပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးဟာယူအေအီးအိန္ဒိယထုတ်ကုန်များအတွက်တကမ္ဘာလုံးဒုတိယအကြီးဆုံးစျေးကွက်အဖြစ်ထွန်းသစ်နှင့်တကွ, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနယ်ပယ်များတွင်သိသာထင်ရှားသောမိတ်ဖက်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အင်ဒီးယန်းယူအေအီးထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများများအတွက်အရေးပါသောပို့ကုန်ဦးတည်ရာအဖြစ်ယူအေအီးနှင့်အိန္ဒိယထဲမှာရှိသကဲ့သို့အရေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပေါ်ထွက်လာပါပြီ။
ဘယ်လိုနှစ်နိုင်ငံပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကြားရှိ Two-လမ်းကုန်သွယ်ခဲ့သလဲ 29,023.68-2007 အတွက် $ 2008 တန်ဖိုးအိန္ဒိယ-ယူအေအီးရေနံမဟုတ်သောကုန်သွယ်မှု။ 2007-2008 များအတွက် Two-လမ်းကုန်သွယ်မှုယခင်နှစ်အတွင်းရာခိုင်နှုန်းကြီးထွားနှုန်းတစ် 40 ပြသခဲ့သည်။ အိန္ဒိယကနေတင်ပို့မှု၏အဓိကပစ္စည်းများဓာတ်သတ္တုလောင်စာ, သဘာဝဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုပုလဲ, စီရီရယ်, ကျောက်မျက်နှင့်ရတနာ, ကြောင့်ဖြစ်စေကြိုး, အထည်, သတ္တု, ဝါဂွမ်းချည်, အဏ္ဏဝါထုတ်ကုန်စက်ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာများ, ပလပ်စတစ်နှင့်ပုဆိုးထုတ်ကုန်, လက်ဖက်ရည်နှင့်အသားများနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပါဝင်သည်။ ယူအေအီးကနေတင်သွင်းမှုဗိုလ်မှူးပစ္စည်းများဓာတ်သတ္တုလောင်စာ, တွင်းထွက်ပစ္စည်းအဆီ, သဘာဝဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုပုလဲ, အဖိုးတန်သို့မဟုတ် Semi-အဖိုးတန်ကျောက်များ, သတ္တုရိုင်း & သတ္တုအပိုင်းအစ, ဆာလဖာနှင့် unroasted သံဏ, လျှပ်စစ်စက်ယန္တရားနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကို သိ. , သံနှင့်သံမဏိစသည်တို့ကိုပါဝင်သည်
ယူအေအီးမှအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်၏ကြီးမားသောအဘို့ကိုတောင်အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံများ, ထိုကဲ့သို့သောပါကစ္စတန်, အာဖဂန်နစ္စတန်, အီရန်, အီရတ်, ဆော်ဒီအာရေဗျ, ယီမင်နှင့်နှောင်းပိုင်း၏အဖြစ်ဒေသတွင်းကတခြားနိုင်ငံတွေမှဒူဘိုင်းကနေ transshipped ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ယူအေအီးမှတင်ပို့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အိန္ဒိယထုတ်ကုန်များအတွက်ကြီးမားသောဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။
အထူးသဖြင့်ရေနံမဟုတ်သောကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးအတွက်ချွန်ထက်တိုး, နှစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်အတိမ်အနက်ကိုတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနှင့်ယူအေအီးကုမ္ပဏီများသည်နှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဖက်စပ်အစပျိုးထိုကဲ့သို့သောတာတာ, Reliance, Wipro, NTPC, Larsen & Toubro, Dodsals နှင့် Punj Lloyd အဖြစ်အိန္ဒိယကနေအရေးကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတွေရဲ့တချို့ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှဘက်မှ, အိန္ဒိယအတွက်တက်ကြွစွာထိပ်ကုမ္ပဏီများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အောက်တိုဘာလများတွင်စသည်တို့ကို Emaar, Nakheel, DP ကမ္ဘာ့ဖလားဖြစ်ကြ၏, ယူအေအီးတက္ကသိုလ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Atul လီမိတက်တို့အကြားတစ်ဦးနားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ခုမှုတွင်ထူထောင်ရန်နည်းပညာလွှဲပြောင်းမှုအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဘို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် Rajasthan အတွက် Of-The-Art စွန်ပလွံပင်တစ်သျှူးယဉ်ကျေးမှုထုတ်လုပ်မှုယူနစ်။
အဲဒီအကြောင်း 1.5 သန်းအိန္ဒိယလူမျိုးယူအေအီးမှာနေထိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အများကြီးမမကြာသေးမီအတိတ်ကအတွက်တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ဘဏ္ဍာရေးများအတွက်အလွယ်တကူရရှိနိုင်အဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြပ်အတည်းမျှသာ, အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းနဲ့အဘူဒါဘီအတွက်တိုင်းပြည်အတွင်း လိုက်. ခံရကျောင်းအုပ်ကြီးစွမ်းအင်, အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအပေါ်သိသိသာသာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမလိုဘဲကွာသက်သက်သာမှန်းဆလှုပ်ရှားမှုကနေအပြောင်းအလဲခိုင်မာစေရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ-related စီမံကိန်းများ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းအင်ဒီးယန်းများစုဆောင်းမှုအပေါ်မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့အလားအလာမရှိပါ။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအနာဂတ်တိုးတက်မှုအတွက်ကောင်းသောအလားအလာရှိပါတယ်သောဒေသများ၏တဦးတည်း, အထူးသဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယသွားအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှထားပြီး Ayurvedic ထူထောင်မှုနှင့် Spa မ်ားအပါအဝင်အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ, အသုံးချဖို့နေကြသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာနယ်ပယ်နှင့်အတူနောက်ထပ်ဧရိယာဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးခရီးသွားများအဖြစ်ကောင်းစွာအိန္ဒိယသို့ယူအေအီးသွားရောက်လည်ပတ်ဆွဲထုတ်ကူညီပေးသော, အိန္ဒိယအတွက် Over-အားလုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဘို့ကောင်းသောနယ်ပယ်ရှိပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန်များထင်ဟပ်, အိန္ဒိယနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအကြားဆက်ဆံရေးအသစ်တခုအတိုင်းအတာလေးလည်းနေကြသည်။ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်မှု၏လယ်ပြင်တွင်ခိုင်မာတဲ့မိတ်ဖက်တည်စေပြီ။ အိမ်နီးချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင့်မြှင့်အတွက်ဦးစားပေးအာရုံကိုပေးတော်မူလတံ့အတိုင်းဤမိတ်ဖက်စသည်တို့ကိုယူအေအီးကာကွယ်ရေး, စွမ်းအင်, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အလေးပေးနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်သို့တိုးချဲ့ပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးနှင့်ထွန်းသစ်စသည်။
ယူအေအီးအသိပညာကိုအခြေခံပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ်နှင့်အိန္ဒိယအာကာသအတွင်းကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်, စိုက်ပျိုးရေး, ဆေးဝါးနှင့်ဇီဝနည်းပညာအဖြစ်ထွန်းသစ်စတွေနဲ့အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, နည်းပညာလွှဲပြောင်း R & D နှင့်ဖက်စပ်ဘို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအစဉ်အဆက်ပထမဦးဆုံးအိန္ဒိယ-ယူအေအီးလေကြောင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဒုတိယအိန္ဒိယ-ယူအေအီးပူးတွဲကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့်အတူသစ်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အထူးနိုဝင်ဘာလ၏မွန်ဘိုင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်, အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ပြဿနာပေါ်ယူအေအီးခြမ်း၏အခိုငျအမာထောက်ခံမှုရတယ်။
စီးပွားရေး & ကုန်သွယ်ရေး
အိန္ဒိယနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအကြားကုန်သွယ်ရေးလင့်များရှည်လျားပြီးကတည်းကတည်ရှိပါပွီ။ ကြီးထွားလာ Indo-ယူအေအီးစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆက်ဆံရေးနှစ်နိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးတန်ဖိုးရှိသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုကူညီသည်။ ယူအေအီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီးအိန္ဒိယနှင့်အတူကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည့်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးအတော်ပင်။
လက်ရှိနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကဒီယူအေအီး-အိန္ဒိယစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများ၏သမိုင်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ကြောင်းပြောပြသည်။ အိန္ဒိယအစိုးရအဆိုအရယူအေအီးဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် 2008-09 များအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကိန်းဂဏန်းများ, တစ်ပြိုင်နက်အဆိုပါယူအေအီးအစိုးရကိန်းဂဏန်းများ 2008 မှာသူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဖက်အဖြစ်အိန္ဒိယပြသထားတယ်။
ယူအေအီးဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ဧပြီလ 2008 အဘို့ - - အိန္ဒိယကိန်းဂဏန်းများ၏အစိုးရ, အိန္ဒိယအကြားနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးအရမတ်လ 2009 ဧပြီလ 44.53- မတ်လ 29.11, 2007% အထိတိုးအတွက်တူညီသောကာလအတွင်းအမေရိကန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမေရိကန် $ 2008 ဘီလီယံကို $ 52.95 ဘီလီယံအထိရှိခဲ့သည် ။ ယူအေအီးအစိုးရကိန်းဂဏန်းများအရ, 2008 အတွက်ယူအေအီး - အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုစော်ဘွား '' စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုရာခိုင်နှုန်း 48 များအတွက်စာရင်းကိုင်, ပတ်ပတ်လည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2007 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိရန် 32 ထံမှရာခိုင်နှုန်း 15 မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ယူအေအီးမှအိန္ဒိယပို့ကုန်အဓိကအားဖြင့်ကျောက်မျက်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, သစ်သီး, နံ့သာမျိုး, အင်ဂျင်နီယာကုန်ပစ္စည်းများ, လက်ဖက်, အသားနှင့်၎င်း၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, ဆန်, ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်အဝတ်များနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ယူအေအီးကနေအိန္ဒိယသွင်းကုန်အဓိကအားဖြင့်ရေနံစိမ်း & ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ, ရွှေ & ငွေ, ပုလဲ, အဖိုးတန်နှင့် semiprecious ကျောက်များ, သတ္တုရိုင်း & သတ္တုအပိုင်းအစ, အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများပါဝင်သည်။
အိန္ဒိယတွင်ယူအေအီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်းမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာကြီးထွားမျက်မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ထိပ်တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်စေသည်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (Foreign Direct Investment) နှင့် FII (နိုင်ငံခြားရေး Institutional ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံခန့်ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အိန္ဒိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံအဓိကယူအေအီးကုမ္ပဏီများမှ FZE, Rak ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့, Damas ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်အဘူဒါဘီ Commercial Bank Casting DP လောက Emaar Group မှအယ်လ် Nakheel, ETA Star Group, အက်စ်အက်စ် Lootah Group မှ, စော်ဘွား Techno ဖြစ်ကြသည်။
အိန္ဒိယမှာလည်းယူအေအီးအတွက်တတိယအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါတယ်။ L ကို & T က, Punj Lloyd, Hinduja Group ကရှေ့ဆောင်ဘိလပ်မြေ, ဟိုတယ် Oberoi Group မှတူသောအိန္ဒိယကုမ္ပဏီများ, ယူအေအီးအတွက်စီမံကိန်းများကိုပါအိတ်စွပ်ပါပွီ။ အဓိကပြန်လည်တင်ပို့စင်တာအဖြစ်ယူအေအီးပေါ်ပေါက်ရေးပြီးနောက်အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများသည်ထိုကဲ့သို့သော Jebel Ali FTZ, Sharjah လေဆိပ်, Hamariya အခမဲ့ဇုန်များနှင့်အဘူ Dhbai စက်မှုစီးတီးအဖြစ်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးဇုန်များအတွက်အရေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။
ခိုင်မာတဲ့ Indo-ယူအေအီးစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများ၏ထူးဆန်းသောအကြောင်းပြချက်ယူအေအီးအတွက်ကြီးမားသောပြည်ပရှိအိန္ဒိယလူဦးရေဖြစ်ပါတယ်။ နီးပါး2သန်းအိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်လက်ရှိအမျိုးသားရေးလူဦးရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်း 30 ထက်ပိုမိုပါဝင်သောနှင့်စော်ဘွား '' အကြီးဆုံးပြည်ပရှိအုပ်စုတစ်စုဖွဲ့စည်းရန်, ယူအေအီးမှာနေထိုင်နှင့်အလုပ်။ အဆိုပါပြည်ပရှိအသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်းအိန္ဒိယစီးပွားရေးကိုစေတယ်။ 2008-09 အတွက်ယူအေအီးနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယကိုစုစုပေါင်းငွေလွှဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ 10-12 ဘီလီယံကိုလှည့်ပတ်ဖြစ်သည့်အိန္ဒိယဖို့ GCC နိုင်ငံတွေထဲကနေအားလုံးစုစုပေါင်းငွေလွှဲ၏သုံးပုံတစ်ပုံတစ်ဝှမ်းဖြစ်သောအမေရိကန်ဒေါ်လာ 32 -25 ဘီလီယံအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည်။
နှစ်နိုင်ငံအကြားလေကြောင်း Links များ
Etihad, Air ကိုအာရေဗျ, Kingfisher, ဂျက်လေကြောင်းလိုင်း, Air ကိုအိန္ဒိယနှင့်လေကြောင်းလိုင်း Air India Express, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတို့က shared အိန္ဒိယနှင့်ယူအေအီးအတွက်အမျိုးမျိုးသောနေရာများအကြားတစ်ပတ်ကို 475 ပျံသန်းမှု, ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီသုံးခုယူအေအီးအမျိုးသားရေးလေကြောင်းလိုင်း (စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, Etihad နှင့် Air အာရေဗျ) ထဲကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒီကဏ္ဍမှာ operated စုစုပေါင်းလေယာဉ်၏ 304% ကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့တစ်ပတ်ကို 64 ပျံသန်းမှုအကြောင်းကို operate ။
အိန္ဒိယနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုလည်းတစ်ဦးက Air န်ဆောင်မှုများသဘောတူညီချက် (ASA) ရှိသည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကိုနိုင်ငံနှစ်ခုလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်နှင့်အခွင့်ပြုချက်ပေးရန်တံ့သောအဘို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့န်ဆောင်မှုများ၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်လေကြောင်းလိုင်းမဆိုအရေအတွက်ကသတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပညာရေး & ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
ယူအေအီးရဲ့ ပို. ပို. ခေတ်မီပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တက္ကသိုလ်များနှင့်အဆင့်မြင့်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုခိုင်ခံ့စေ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်, ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေး, မိုးနည်းရေရှားစိုက်ပျိုးရေး, သဲကန္တာရဂေဟဗေဒ, မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အဆင့်မြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ဧရိယာများတွင်အပါအဝင်သိပ္ပံနည်းကျပူးပေါင်း, မြှင့်တင်ရန်။
ရှိတ် Zayed - နိုင်ငံထူထောင်သူခေါင်းဆောင်
မြင့်ရှိတ် Zayed bin Sultan Al-Nahayan, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏တည်ထောင်သူ, အဘူဒါဘီအတွက် 1918 မွေးဖွားခဲ့သည်။ 1922 - သူ 1926 ထံမှအဘူဒါဘီအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရှိတ် Sultan bin ကို Zayed ၏သားလေးယောက်ရဲ့အငယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှိတ် Zayed သူသည်မိမိအဘာသာရေးပညာရေးကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏အခြေခံမူသင်ယူနှင့်သန့်ရှင်းသောကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုလေ့လာရှိရာအယ်လ် Ain မှအဘူဒါဘီကနေသူ့မိသားစုနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ရှိတ် Zayed falconry ၏ဝါသနာကြီးနှင့်အမဲလိုက်နှင့်ကုလားအုပ်နှင့်မြင်းပြိုင်ပွဲကဲ့သို့အခြားရိုးရာအားကစားပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
1946 ခုနှစ်တွင်ရှိတ် Zayed အဘူဒါဘီ (အယ်လ် Ain) ၏အရှေ့ပိုင်းဒေသသို့မင်းခန့်အပ်ခဲ့သည်နှင့်သူအယ်လ် Ain တစ်ဦးကိုအစိုးရသောမင်းအဖြစ်သုံးစွဲသူတို့အား 20 နှစ်တာကာလအတွင်းသူသည်ဧရိယာ၏ရွာတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ခေတ်မီခြင်းမရှိအားထုတ်မှုနှမြော။
1966 ခုနှစ်တွင်ရှိတ် Zayed အဘူဒါဘီ၏အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်စော်ဘွား, အဆောက်အဦးကျောင်း, ဆေးရုံနှင့်လမ်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်သူ၏နိုင်ငံရေးအသိနှင့်သူ၏အနာဂတ်ရူပါရုံကိုအာရေဗျပင်လယ်ကွေ့၏အိမ်နီးချင်းစော်ဘွားနှင့်အတူတစ်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဖွဲ့စည်းရန်သူ၏အာရုံကိုလှည့်။ သူကဗြိတိန်နိုင်ငံကဒေသကနေဆုတ်ခွာမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပြီးနောက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးအဘို့ပဌနာဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ2ကြိမ်မြောက်, 1971 တွင်, ရှိတ် Zayed နှင့်ခြောက်လအိမ်နီးချင်းစော်ဘွားများ၏အစိုးရသောမင်းတို့တရားဝင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ရှိတ် Zayed ရဲ့အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့တို့သည် လာ. ကြေညာခဲ့သည်။
ယင်း၏တည်ထောင်ကတည်းကရှိတ် Zayed တိုင်းပြည်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ဒေသတွင်း၌အများဆုံးသာယာဝပြောတဲ့တပါးအမြိုးသားတစျဦးသို့လှည့်အပေါ်, မိမိညီအစ်ကိုတို့, စော်ဘွားများ၏အစိုးရသောမင်းတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကအမြော်အမြင်ရှိရှိယူအေအီး၏နိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများ၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဘဝ၏ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုသူတို့နှင့်အတူများကိုတိုင်းပြည်၏ရေနံရောင်းရငွေမှဘဏ္ဍာငွေစီမံခန့်ခွဲ။ ရှိတ် Zayed ၏နိုင်ငံရေးပညာနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားအမြင်များတိုင်းပြည်အတွင်းအပြင်နှင့်ပြင်ပရှိခံစားခဲ့ရခဲ့ကြသည်။ သူကမကြုံစဖူးဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှု, လေးစားမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ရှိတ် Zayed နိုဝင်ဘာလ2ကြိမ်မြောက် 2004 အပေါ်ကွယ်လွန်သွားပေမယ့်သူကအကြီးအခေါငျးဆောငျမြား၏ကမ္ဘာ့မှတ်ဉာဏ်နှင့်လာစဉ်မြေးဆက်အဘို့မိမိလူစိတ်နှလုံးကိုအတွက်အသက်ရှင်လျက်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ရှိတ်ခါလီဖာဘင် Zayed Bin ကို Sultan Al-Nahyan
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု 1971 တည်ထောင်ခဲ့သည့်လွတ်လပ်သောဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာအားလုံးဒေသများရှိယူအေအီးစည်းစိမ်ချမ်းသာများနှင့်တိုးတက်မှုတိုးမြှင့်များ၏ဘို့အလိုငှါထားကြပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်ယူအေအီးနိုင်ငံသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဘဝပေး။
မြင့်ရှိတ်ခါလီဖာဘင် Zayed Bin ကို Sultan Al-Nahyan ယူအေအီး၏ပထမဦးဆုံးသမ္မတအဖြစ်သူသည်သူ၏နှောင်းပိုင်းတွင်ဖခင်နာရီရှိတ် Zayed Bin ကို Sultan Al-Nahyan ၏သွားတာပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ3၏ 2004rd အပေါ်ညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရ ။
အဆိုပါအဓိပတိကောင်စီတို့ကထောက်ခံဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ, ထုံးအဖွဲ့တော်တို့နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ Sign နှင့်ထုတ်ပြန်။
သည်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်သည်သူ၏နှုတ်ထွက်စာကိုလက်ခံနှင့်သူ့ကိုအဓိပတိကောင်စီများ၏ခွင့်ပြုချက်နဲ့သူ့ရဲ့အနေအထားကနေနုတ်ထွက်ကြကုန်အံ့, ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဝန်ကြီးများခန့်အပ်, ၎င်းတို့၏နှုတ်ထွက်စာကိုလက်ခံနှင့်သုဒ္ဓ၏အကြံပြုချက်အပျေါမှာမိမိတို့၏ရာထူးကနေနုတ်ထွက်ဖို့သူတို့ကိုမေးဖို့ ဝန်ကြီး။
အဆိုပါသမ္မတနှင့်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဖက်ဒရယ်တရားရုံး၏တရားသူကြီးအဘို့ကလွဲလို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များနှင့်အခြားအကြီးတန်းဖက်ဒရယ်အရပ်ဘက်အတွက်အဖွဲ့ချုပ်နှင့်စစ်တပ်၏န်ထမ်းများအတွက်သံတမန်ရေးကိုယ်စားလှယ်များခန့်အပ်သူတို့၏နှုတ်ထွက်လက်ခံဖို့ကိုကက်ဘိနက်၏ခွင့်ပြုချက်အပျေါမှာနုတ်ထွက်ဖို့သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။ ထိုသို့သောချိန်း, နှုတ်ထွက်စာသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခံရ၏လက်ခံမှုထုံးအဖွဲ့တော်တို့အဆိုအရထွက်သယ်ဆောင်နှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများနှင့်အညီဖြစ်ရလိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောအလှဆင်ခြင်းနှင့်ဆုတံဆိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်အညီ, အရပ်ဘက်နှင့်စစ်ဘက်နှစ်ဦးစလုံး, ဂုဏ်အသရေ၏အလှဆင်ခြင်းနှင့်ဆုတံဆိပ်ဆွေးနွေး။
သူ့ဖွဲ့ရှိတ်ခါလီဖာဘင် Zayed Al-Nahyan ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
မြင့်ရှိတ်ခါလီဖာဘင် Zayed Al-Nahyan အဘယ်သူ၏တည်ထောင်ခြင်းဒီဇင်ဘာလ2၏ 1971 ကြိမ်မြောက်အပေါ်ကြေငြာခဲ့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, ၏ဒုတိယသမ္မတဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းရန်ခုနစ်လုံးကိုစော်ဘွား၏အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ဖြစ်သောအဘူဒါဘီ၏စော်ဘွားများ၏တစ်ဆယ့်ခြောက်ကိုအုပ်စိုးသောမင်းဖြစ်၏။
မိမိအမြင့်ယူအေအီးတစ်ဦးကသမ္မတအဖြစ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာယူဆနှင့်3၏နိုဝင်ဘာလ၏ 2004 ကြိမ်မြောက်အပေါ်အဘူဒါဘီ၏စော်ဘွားတစ်ဦးကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်လာခဲ့သည်, သူ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဖခင်သည်2ကြိမ်မြောက်အပေါ်ကွယ်လွန်သွားသူကိုရှိတ် Zayed Bin ကို Sultan Al-Nahyan ဆက်ခံ 2004 ၏နိုဝင်ဘာလ၏။
မြင့်အဘူဒါဘီ၏စော်ဘွား၏အရှေ့ပိုင်းဒေသတွင် 1948 တှငျမှေးဖှားနှင့်ဒေသတွင်းများအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအချက်အချာဖြစ်သောအယ်လ် Ain ၏မွို့၌မူလတန်းပညာရေး, လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူနှောင်းပိုင်းရှိတ် Zayed Bin ကို Sultan Al-Nahyan ၏အကြီးမားဆုံးသားဖြစ်၏နှင့်သူ၏မိခင်သည်မိမိမြင့် Sheikha Hissa bint မိုဟာမက်ဘင် Khalifa Bin ကို Zayed Al-Nahyan ဖြစ်ပါတယ်။
မြင့် kinship အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဖြစ်ယနေ့ခေတ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုအခြေချကြောင်းအာရပ်အနွယ်တို့တွင်အများဆုံးများအတွက်မိခင်အနွယ်ဖြစ်စဉ်းစားသောဗာနိ yas ၏အနွယ်ပိုင်ဆိုင်။ ဤသည်မှာအနွယ်သမိုင်းကြောင်း "ဗာနိ yas မဟာမိတ်အဖွဲ့" အဖြစ်လူသိများသည်ဖြစ်သောအာရပ်အနွယ်တို့ထံမှတစ်ဦးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
မြင့်သည်သူ၏တစျခုလုံးကိုအသက်ရှည်သမျှအဆင့်ဆင့်တစ်လျှောက်လုံးမိမိအနှောင်းပိုင်းတွင်ဖခင်ရှိတ် Zayed Bin ကို Sultan Al-Nahyan ကိုက်ညီနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ပထမ post ကိုစက်တင်ဘာလ၏ 18 ကြိမ်မြောက်အပေါ် "ကိုအုပ်စိုးသောမင်းအရှေ့ပိုင်းဒေသအတွင်းရှိကိုယ်စားလှယ်နှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရှိတရားရုံးများ၏" 1966 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအနေအထားသူ၏အသက်တာ၌ကြီးစွာသောအရေးပါခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဖွဲ့အယ်လ် Ain ၏မွို့၌တည်းခိုနေစဉ်သူသည်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာယူအေအီးအမျိုးသားရေးနိုင်ငံသားများနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သူတို့ရဲ့အခြေအနေအပြည့်အဝသတိထားပါနှင့်သူတို့၏မျှော်မှန်းချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းပေးထားခဲ့သည်။
မြင့်ဦးရစ်သရဖူဖေဖော်ဝါရီလ 1 ၏ 1969 ရက်နေ့တွင်ဘူဒါဘီ၏စော်ဘွား၏မင်းသားနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာနအကြီးအကဲအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကြောင့်ဒီအနေအထားမှသူသည်စော်ဘွားအတွက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းယူဆနှင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍနှင့်ခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသောဘက်စုံသုံးအင်အားစုသို့သေးငယ်တဲ့လုံခြုံရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ကနေလှည့်။
မေလ, 1 ၏ 1971 ရက်နေ့တွင်သူ၏ဖွဲ့ရှိတ်ခါလီဖာ "အဘူဒါဘီ၏စော်ဘွားများအတွက်ပထမဦးဆုံးဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ" ၏အနေအထားကိုကျင်းပနှင့်ဤဝန်ကြီးအဖွဲ့မှာကာကွယ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးတွင်လည်းယူဆ။
ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်များ၏ကြေငြာပြီးနောက်သူ့ဖွဲ့ကသူ၏ဒေသခံတာဝန်များအပြင် 1973 ၏ဒီဇင်ဘာလ၌ဖွဲ့စည်းခဲ့သောခဲ့သောဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏အစိုးရအဖွဲ့၏ "ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၏ post ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
အမှုဆောင်ကောင်စီသည်သူ၏သမ္မတသက်တမ်း၏သက်တမ်းကာလအတွင်းသူ၏ဖွဲ့ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၏စော်ဘွားအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးမျက်မြင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတက်လိုက်ကြ၏။ ထိုမှတပါး, သူ့မြင့်အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုများ၏အဆောက်အဦ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ခေတ်မီဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအာရုံကိုအားပေးတော်မူပြီ။ သူလည်းဒီလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုများအတွက်အစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်သည်အတိုင်း, ခေတ်မီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းဥပဒေပြုစည်းမျဉ်းများတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
အမှုဆောင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သူ၏တာဝန်များအပြင်, သူ့ဖွဲ့ 1976 အတွက်အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာဏာပိုင်များ၏ထူထောင်ရေးနှင့်သမ္မတတာဝန်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအခွင့်အာဏာဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်အစဉ်အဆက်လာရန်အဘို့အဝငျငှေ၏တည်ငြိမ်သောအရင်းအမြစ်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မဟာဗျူဟာကျဗျာဒိတ်ရူပါရုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စော်ဘွား၏ဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကြီးကြပ်။
သူ့ဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်လေးနက်လူမှုရေးသက်ရောက်မှု၏အဓိကဖှံ့ဖွိုးတိုးတအစပျိုးတစ်ခုမှာလေ့ "ရှိတ်ခါလီဖာကော်မတီ" အဖြစ်လူသိများသောလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဆောက်အဦးများဦးစီးဌာန၏တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဌာန၏လုပ်ဆောင်မှုများအဘူဒါဘီ၏စော်ဘွားအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စည်းစိမ်ချမ်းသာရရှိအတွက်ကူညီပေးခဲ့သည်။
မြင့်လည်းသူကအထူးအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအတွက်တိုးမြှင့်အကျိုးစီးပွားအားပေးတော်မူပြီဘယ်မှာဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ယူအေအီးတပ်မတော်နေ့၏လက်ထောက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောတပ်မှူး၏ post ကိုယူဆ။ ကြောင်းကာလအတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောခုန်ထောက်ပံ့ရေး, သင်တန်းနှင့်ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့်သူ၏ဖွဲ့ထိုကဲ့သို့သောတပ်ဖွဲ့များ၏ကဏ္ဍအားလုံးတွင်မှပေးကြိုးပမ်းကြောင်းအဆင့်မြင့်နည်းစနစ်ကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်း၏အဆင့်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တစ်ဦးကသိသိသာသာအလှူငွေပြည်နယ်များ၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောမူဝါဒရုံကလွဲပြီးအပေါ်အခြေခံပြီးသောစစ်တပ်အယူဝါဒရေးဆွဲရာတွင်၏ဧရိယာထဲမှာသူ့အမြင့်တို့ကဖန်ဆင်းထားသည်။ ဒီအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောမူဝါဒကအလယ်အလတ်ချဉ်းကပ်၏မွေးစား, အပြင်အခြားသူများကိုမျက်မှောက်ရေးရာနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွား၏လေးစားမှုကို non-ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ထိုအရုံကလွဲပြီးအလငျး၌, သူ့မြင့်ပြည်နယ်၏လွတ်လပ်ရေး, အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်အကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းကာကွယ်ရေးမူဝါဒမှာရေးဆွဲမကြိုးစားအားထုတ်မှုကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ ဤမူဝါဒတစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာ၏လေးစားမှုရရှိခဲ့သည့်အဆင့်မြင့်အနေအထားအတွက်ယူအေအီးတပ်မတော်နေ့အားမရမှလှူဒါန်းခဲ့သိရသည်။
သူ့ဖွဲ့ရုံးယူဆပြီးနောက်, ယူအေအီးအစိုးရများအတွက်ပထမဦးဆုံးမဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်နန်းစံအောက်တွင်စတင်ခဲ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သူ့ဖွဲ့ကိုလည်းပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ချိန်းပေါင်းစပ်မယ်လို့ထိုကဲ့သို့သောထုံးစံ၌ဖက်ဒရယ်အမျိုးသားရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ technique ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ရန်အတွက်ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာအတှေ့အကွုံဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်ပဏာမခြေလှမ်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဒီနေ့၏အဆုံးအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်ပွဲများမှတဆင့်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များရွေးရန်အခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မယ်။
မြင့်ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum
မြင့်ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum ဖက်ဒရယ်အဓိပတိကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်စော်ဘွား၏အစိုးရသောမင်းတို့အားဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီးနောက်5ဇန်နဝါရီလ 2006 ကြိမ်မြောက်အပေါ်ဒုတိယသမ္မတနှင့်ယူအေအီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သူ၏ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာယူဆထားသည်။ အစဉ်အဆက်ကသူ့ချိန်းကတည်းကယူအေအီး၏ဖက်ဒရယ်အစိုးရပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်နဲ့ထိရောက်စွာဖက်ဒရယ်အရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံအပေါ်အောင်မြင်မှုနှုန်းတစ်ထူးခြားတဲ့အရှိန်အဖြစ်သူ့ဖွဲ့ရဲ့အာရုံ၏အလငျး၌ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာအစိုးရအစပျိုးများ၏အရေအတွက်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမျက်မြင်ဖြစ်ပါတယ် ။
ဖက်ဒရယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်ပွင့်လင်းထုံးစံ၌တာဝန်ခံသေချာစဉ်ထိုမှတပါး, သူ့အမြင့်အဓိကအားနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်တည်တံ့နှင့်ဟန်ချက်ညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရရှိမှာရည်မှန်းထားတဲ့ဧပြီလ 17 ကြိမ်မြောက်, 2007 ပေါ်တွင်ယူအေအီးအတွင်းပထမဆုံးဖက်ဒရယ်အစိုးရမဟာဗျူဟာတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ် နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသားများ၏ကောင်းကျိုးကို။
သူ့ဖွဲ့ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဇန်နဝါရီလ 4th, 2006 တွင်, သူ့ဖွဲ့ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum ရှိတ် Maktoum ဘင် Rashid Al-Maktoum ၏အသေခံအောက်ပါဒူဘိုင်း၏အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒုသမ္မတနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ယူအေအီး၏, နှင့်ဒူဘိုင်း၏အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်လာကတည်းက သဲအစပျိုးအနေနဲ့အံ့သြမှုနှုန်းမှာထွက်ရှင်းပြီပြီ.
ယခုနှစ် 2007 ပြည်တွင်းထုတ်နှင့်ဒေသတွင်းရှိတ်မိုဟာမက်အဘို့မူထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုများမျက်မြင်။ ဧပြီလ 17th, 2007 တွင်, ရှိတ်မိုဟာမက်ကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ဖက်ဒရယ်အရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်အလောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးကြောင့်လုံ့လဝီရိယ, တာဝန်ခံမှုနှင့်ပွင့်လင်းသေချာ, တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူယူအေအီးအစိုးရမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းပြသလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်များ၏ concept ကိုသက်တမ်းတိုး, ပညာရေးနှင့်, နှစ်ဦးစလုံးပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍများအတွက်အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များစိုက်ပျိုးသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနမြှင့်တင်ရန်, အသိပညာပြန့်ပွား, စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်မှုအားပေးအားမြှောက်, လူငယ်အားပေးအားဖြင့်ဒေသတွင်း၌အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည် ယဉ်ကျေးမှု, အမွေအထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုများအကြားနားလည်မှုပလက်ဖောင်းမြှင့်တင်ရန်။